Umphumela womdlalo wokugcina: Ukulungiswa Kwezombusazwe 1 - I-Common Sense 0 | Kusuka kuLinux
Angenzanga lutho izolo kepha ngivule isiphequluli sami nesokuqala noticia engikubonile kwakuyi- ukwesula kukaBrendan Eich njenge-CEO yeMozilla, kodwa hhayi lokho kuphela, ubuye amemezele ukuthi uyashiya iMozilla Foundation. Uma ungivumela ukuthi ngichaze isihloko senoveli kaGG Márquez, siwubonile umlando wokufa okwabikezelwa; ubonakale eza, yize kunezitatimende ezenziwe ku ingxoxo inikezwe iphephandaba iThe Guardian, ebelibonakala lingenakuphikwa.
Ngo-2008 uMnu Brendan Eich wenze umnikelo (mathupha) we-USD 1,000 womkhankaso wokweseka umthethosivivinywa ophakamisa ukuvinjelwa komshado wezitabane esifundazweni saseCalifornia, esaziwa ngokuthi "Isiphakamiso 8". Lesi siphakamiso savunywa ngoNovemba 2008 yisishayamthetho salowo mbuso, saba umthetho wezwe, kwaze kwaba ngo-Okthoba 2010 iNkantolo yaseFederal yamemezela ukuthi ayihambisani nomthethosisekelo, ekugcineni yachithwa yiNkantolo Ephakeme yase-US ngoJuni 2013 .
Lawa ngamaqiniso, okunye ukuqagela okumsulwa: izinsolo zokuzondwa kwabantu bobulili obufanayo nobandlululo, ukubandlululwa namanye ama-epithets akhishwe kakhulu zisuselwe kuphela emibonweni yabagxeki nasekuqageleni kwabo, ngoba, ngaphezu kwalokhu okungenhla, akekho noyedwa onikeze ubufakazi lokho kuvuma lezo zinsolo; ngamafuphi, yini bayahlulela (nokulahla) umuntu ngezinkolelo nemibono yabo, ivezwe ngokweseka uhlelo lwezomthetho, oluyingxenye yomdlalo wentando yeningi wanoma isiphi isizwe sanamuhla esiphucukile.
Ake sikwenze kucace bha: ukuthi umuntu akawuvumeli umshado wezitabane akusho ukuthi bayabandlulula noma bazonde labo abanalolo thando lwezocansi, empeleni, ngiyazi abantu "abanobungane" ngokweqile abangawuvumeli umshado wezitabane, ngoba kubo Igama elithi umshado linezimpawu zenkolo ezenza lihambisane nenkolo abathi, ngiyayiqonda futhi ingaphakathi kwamalungelo abo. Yingakho kwamanye amazwe kunesibalo esisemthethweni se- "inyunyana yomphakathi" lokho kunikeza abashadikazi amalungelo afanayo (ikakhulukazi ezomnotho) njengesibalo somshado, ekugcineni, masithembeke, yilokho konke lokhu okumayelana nakho.
Ngiyakuqonda ukuthi umthetho okukhulunywa ngawo ubangele izinkinga kubantu abathandana nabobulili obufanayo kuleso simo, kepha angikhumbuli ngifunda ngezenzo zokungalaleli zomphakathi noma ngokuduba, kepha kunalokho ukuthi ukungabi nabulungiswa kwaxazululwa ngqo ngaphakathi kohlaka lomthetho. Ngeshwa lokho akukenzeki manje, ngoba ukusabela okungalingani kwengxenye yomphakathi we-LGBT ukwazile ukuphuca wonke umphakathi umphakathi isipiliyoni kanye nekhono yengcweti ekhaliphile.
Ngiyazi ukuthi ngalokhu okuthunyelwe ngizocasula abaningi, kepha ngikhathele kakhulu ukunemba kwezepolitiki; ukuthi izintshisakalo zangempela zabo bonke zintshontshwe ngabashisekeli abambalwa, ukuthi ukuntuleka kokusebenzisa ingqondo kuvimbela ukwehlukanisa phakathi kwemibono nezenzo ezisemthethweni zabantu kanye namandla abo okunikela ngolwazi olukhululekile nolukhululekile nobuchwepheshe emphakathini nokuthi egameni wokulingana, ukufakwa kanye nentando yeningi, ubushiqela balabo abamemeza kakhulu phezu kwezikhulu ezinkulu buthule buyasungulwa.
Ku-LGBT Taliban, into eyodwa nje: Ngiyabonga kakhulu, ukwenze kwacaca ukuma kwakho, icala lakho selikhuhluliwe; njengoba isihloko sisho, uwunqobile lo mdlalo, ungawugubha manje, kodwa ngicela uchazele wonke umphakathi:Yini isihogo okufanele siyigubhe manje?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Umphumela womdlalo wokugcina: Ukulungiswa Kwezombusazwe 1 - I-Common Sense 0
Amazwana ayi-129, shiya okwakho
Okokuqala nje: ziqiniseni, isiphepho sesihlabathi siyeza!
Ngalokho kusho, ngiza ephuzwini lami:
Bekuvele kushiwo phambilini, bengiphikisana kakhulu esihlokweni esandulele kepha yilokho ngokusobala, ukweqisa futhi "okulungile kwezepolitiki" Zihambisana, ngakho-ke masithembeke.Ngubani isihogo esiwina ngalokhu? Abantu beqembu le-LGBT? Ngokuzimisela? Banqobile?
Baphuca umphakathi waseMozilla i-CEO elungele ukuba yi-CEO, ngaphandle kwezinkolelo zabo futhi okubi kakhulu, baheha isithombe esibi kakhulu esisekelweni futhi bangasifaka engozini ngokuzayo ... Ingabe kufanelekile ukwenza umonakalo omkhulu emphakathini wonke ngoba nje iqembu lalelo qembu lithatha ulaka olungaka? Futhi ngithi iqembu ngoba kuyaziwa ukuthi amanye amalungu e-LGBT akhulume ngokumelene nokuduba ngoba kuphambene nezinhloso zeMozilla.
Ukuthi enye yezinhlangano ezimbalwa ezine-ajenda yomphakathi ebandakanya wonke umuntu yayingenaye umuntu ekhanda owayengafanelekile ukuyilandela.
Ukuthi amalungu e-LGBT ahlupheke ngenxa yemithetho engenabulungiswa, kufanele asebenze ngaphansi kwenduku yanoma ngubani okhokhele ukubanyusa.
UNelson Lombardo kusho
Kuhle kakhulu, kucacile futhi kufushane.
Phendula uNelson Lombardo
Lokho othi bakunqobile kuphenduka uthuli phambi kwe:
Okokuqala, basebenza esisekelweni lapho u-Eich wayengumbambisene khona, futhi lokho kukodwa kungumbono wemigomo yakhe.
Okwesithathu, bakhuluma ngokungahambisani nokucwaswa, kepha kulokhu basebenzisa ukubandlulula njengesikhali. Yimiphi imibono engenakuphikiswa, amahloni abanye yilokho okunikezwa yilaba balingisi, okungebona iningi lalabo abakha umphakathi we-LGBT.
PS: Angilwi namalungelo alinganayo ongqingili, kodwa ngiphikisana nesimo sengqondo salabo abacabanga ukufeza izinhloso zabo ngokudlula wonke umuntu ngaphandle kokukhathalela noma yini enye.
I-LOL, futhi konke lokho kuphikisana kanjani nalokho abakuzuzile?
Okokuqala ngoba iMozilla indala kunezindaba ze-Eich nokuphikisana.
Okwesibili, umsebenzi wakhe awukaze ugxekwe ngaphandle kwezenzo zakhe ngokumelene nedlanzana.
Okwesithathu, futhi? Ngikhathele ukukuchaza, ukubandlulula akukubi ngokwako, kubi kuphela uma kwenziwa ngezizathu ezingenangqondo njengokucwasa ngokobuhlanga nokunye.
PS: Kungadingeka ukuhlola izinhloso, ngoba nakulokho kunamazinga, akufani nokuthi inhloso yakho ukulingana nokuqinisekisa kwamalungelo abantu kuwo wonke umuntu, njengoba inhloso yakho ukunyathela lawo malungelo alabo abangahlanganyeli nobulili bakho. Bese ucabanga ukuthi ngabe empeleni kulokhu weqa othile.
Futhi okushoyo-ke kunikeza izizathu zokubungaza okuthile, ngoba:
1.- IMozilla "yasungulwa ngokubambisana" yilowo muntu, ngakho-ke ukusebenza enhlanganweni lapho "ukuzonda abathandana nabobulili obufanayo" kwakuhlobene nokudala kwayo kufanele okungenani kube ukuhlambalaza umphakathi wakho. Kufana nokucwasa umuntu ophethe izigqila, kepha ukufisa ukuba yisigqila akunangqondo.
2. - Kepha kusobala impela ukuthi isikhundla sakhe bekuyinto eqondene naye (lapha sisebenza lesi sisho: Okwenziwa ekhaya, ukuhlala ekhaya, okwenziwa emsebenzini, ukuhlala emsebenzini), nokulandela imigomo yokufakwa kweMozilla , lapho wonke umuntu enendawo yakhe kungakhathalekile izikhundla zakhe, izenzo abazithathile azizange zigcine zokwephula leso simiso. Mhlawumbe bona ngokwabo abagcini nje ngokuphula ngaleyo khodi abavikela izinyo nezipikili. Vele bayalivikela lapho libazuzisa, lapho lingabasizi bona, leyo khodi umane uyincwadi efile. Kuyadabukisa kakhulu ukubona ukuthi lobo buso bomuntu buphindwa kaningi kangaka namuhla.
3.- Ngokusho kwakho nangemiqondo yakho "yokubandlululwa okuhle" kanye "nokucwaswa okubi" ngakho-ke, kungavumeleka ngokuphelele ukuthatha izinyathelo ngokumelene neqembu elithile kungakhathalekile ukuthi ziyini, ukufeza izinhloso ezisengqondweni. Futhi isisusa esingenangqondo, ngoba kusobala ukuthi sinakho, okwenzeka eMozilla kungubuwula bezinga elingaziwa, lapho singazi ukuthi umphakathi uthinteke kanjani ngemuva kwale micimbi. Futhi, ngubani ongasho ngamandla afanele okuziphatha ukuthi hlobo luni lobandlululo oluhle nolubi?
1. Ngabe kuyasebenza yini uma abantu beya emsebenzini bengazi ukuthi lo co-founder wayezonda ongqingili? IMozilla ineminyaka engaphezu kwengu-10 ubudala kanti u-Eich ubedume ngo-8 kuphela.
Futhi ukuthi le ngxabano yakho ayilutho ngaphandle kokukhohlisa kokuqamba.
Ucabanga ukuthi ikhwalithi eyingqayizivele yento yabiwe yizo zonke izingxenye.
2. Okubuhlungu ukubona ukuthi abanye babona umucwana nje esweni labanye, bese bekhononda ngokuthi "ukweqisa kwabambalwa kuyaphumelela" kanti ngakolunye uhlangothi bancamela ukulahlekelwa ngabathuthukisi nabaphathi abaningi ukugcina umphathi oyedwa ongahambisani Iphrofayili.
3. «Ngokuya kwakho nangemiqondo yakho" yokubandlululwa okuhle "kanye" nokubandlululwa okubi "ngakho-ke, kungavumeleka ngokuphelele, ukuthatha isinyathelo ngokumelene neqembu elithile, NAKHO NOMA BAKHONA YINI, ukufeza izinhloso ezisengqondweni . »
AMANGA. Lokho ukuqagela kwakho.
"Ngaphandle kwalokho, ubani ongasho ngamandla anele okuziphatha ukuthi hlobo luni lobandlululo oluhle nolubi?"
Ngaphandle kwamandla athile okuziphatha, kunamalungelo esintu, anohlaka lwezomthetho nomlando womlando wamakhulu ezinkulumompikiswano. Kucacile lapho kucaciswa ukuthi yiziphi izimo okungafanele zibandlulule.
+1 I-CEO ingubuso benkampani, uma ingayimele ngibona kukuhle ukuthi bamxoshile. Enye into engenalutho kwakuwumbhali wohlelo noma esinye isikhundla esingeyona esidlangalaleni
Ngamanye amagama, isithombe esimsulwa nombhedo "olungile kwezepolitiki", ngoba iMozilla ayizuzi lutho, umphakathi awutholi lutho (mhlawumbe ukuphakanyiswa kokuduba okungenangqondo nokwenziwe ihaba), wena njengomsebenzisi awutholi lutho, nami, noma omunye umuntu ngaphandle ingxenye encane yeqembu le-LGBT elikhuthaze ukuduba, yebo, ukwaneliseka, njengokuthi ubani othi lapha "ongakhaliyo angancelisi", kimi empeleni lokho ...
Angiboni lutho olunye kukho konke lokhu ngaphandle komonakalo omubi weMozilla owenziwe yilabo abathi bayamthanda, kuhle, ungasho ukuthi banobuchwepheshe kangakanani.
Kahle-ke bekufanele ngabe ubuzile:
YIKUPHI okubalulekile abakunqobile?
Kungani ukwenza lokhu kungaphansi futhi unethemba lokuthi kuwo wonke umuntu kungamampunge ukuthi kuyini ngawe, kunqunyelwe ebuntwaneni.
Isibonelo, ukuhola okuthile njengomsebenzisi kuwubuwula kimi, ngoba ngaphambi kokuba ngisebenzise, ​​ngingumuntu, futhi noma ngingeyena ungqingili nginomuzwa wokuthi ngiwina ngisho engxenyeni encane indawo lapho amalungelo abantu aya ngokuhlonishwa khona.
Ukulimala okubi kweMozilla? I-WTF
Lapho u-Eich esula esikhundleni, i-CEO yalahleka, ngenkathi besesikhundleni abenzi bezinhlelo abaningi ngisho nabaphathi balahlekile.
Thola amaqiniso akho ngqo.
Umphakathi ngokusobala uthola ulwazi ngalezi zinkinga, nokuthi kunabantu abangeke bazibekezelele izenzo zalolu hlobo.
Ngicabanga ukuthi umphakathi uwina ngokulingana uma nje lokhu kuqondakala njengokuthi lolu hlobo lwesenzo alunakwemukelwa ngumphakathi.
Inhlangano yebhizinisi lakwaMozilla ibenza bavezwe kakhulu yilolu hlobo lwento.
USteven Nicolson kusho
Anginalutho olumelene nabangqingili, kepha yingakho ngikuqinisekisa ukuthi abaphutha uma bengalungile.
Kepha inqobo nje uma beqhubeka nokucabanga ukuthi bonke labo abangacabangi njengabo banephutha futhi bayaqhubeka nokukholelwa ukuthi bayashushiswa futhi bayabandlululwa, abathandana nobungqingili kakhulu uqobo lwabo.
Futhi uma bekufanele basolwe ngokuhamba kwale-CEO (engingayikholwa), ngiyabona ukuthi akukho ukuzidela ohlangothini lwalelo qembu lengcindezi.
Phendula uSteven Nicolson
Akulungile ukusho ukuthi ukweqisa kuhambisana "nokulungile kwezepolitiki". Amagama akho awela kunoma isiphi isikhundla lapho izinto zithathwa zilungile kwezepolitiki. Ngempela kwezepolitiki kufana "nokubukeka kahle kuwo wonke umuntu." "Ingqondo ejwayelekile" odabeni oluphikisanayo olufana nalolu alukho, ngoba kunemibono eyehlukile, ngakho-ke kuzoba khona labo abamele noma abamele ukuhamba kwalo muntu.
Ake sibone, unaleli hlelo elibekwe ngokungenasisekelo kuzisekelo ezingamfanele.
U-Alan Turing (ungqingili) ubaluleke kakhulu kimi ngokuba ngomunye wababa bekhompyutha.
Qaphela i-gaystapo. Ngicabanga ukuthi kuzofanele ngibhale ingxenye yesithathu neyokugcina yale opera yesepha.
Ezinsukwini ezintathu ezedlule ngithathe inkululeko yokulayisha i-athikili yakho: «Inhlonipho yokubhebhana ngicela» kwi-aggregator http://www.meneame.net ngoba yindatshana eyodwa kuphela ebishicilelwe lapho ngombono oyingxenye enkulu yalolu daba evela kuBrendan Eich, iMozilla Foundation kanye nalabo ababhikishela ukhetho lwe-CEO entsha.
Ngicabanga ukuthi impikiswano yinhle; Ngikholwa ukuthi inkululeko yokukhuluma ibaluleke njengelungelo lempilo. Futhi kulesi sixhumanisi unokuthunyelwa (okuhanjiswe ekhasini lokuqala ngabasebenzisi) nemibono eminingi ngakho, kufaka phakathi neyami:
QAPHELA: igama lami lomsebenzisi ku-meneame ngu- «madremelian». Igama lami belingatholakali ngenkathi ngibhalisa ku-2011.
Ukubingelela nokubonga ngale ndatshana.
Awukwazi ukuba ngumuntu ozenzisayo.
Ekugcineni, nawe, njengabo bonke abanye abantu, njenge-LGBT, lapho amalungelo akho nezintshisekelo zakho kuthinteka, uyagxuma futhi uthathe amandla, bese uzama ukucwaninga noma uthathe izinyathelo ezidingekayo ngokumelene nalabo abathinta izintshisekelo zakho.
Ungabe usaklebhula izingubo zakho. Okuvelayo ekugxekeni kwabo okuthukuthele nokuthukuthele ngama-LGBT ukuthi awuyena owe-LGBT, awunabo ngempela abangane be-LGBT noma umndeni, noma ngabe uthini kamuva nje (lokho kuyipolitiki eyiqiniso, okungukuthi, kungamanga ukubonakala kuqhubeka)
Ngithole ku-G + ye-diazepan, imininingwane ethakazelisa kakhulu: https://plus.google.com/102356967168517127926/posts/HqDSNb8dzWx
shit, konke okuphawulwa phakathi kwezimpawu ezinkulu-ezincane kulahlekile.Amazwana ami angaphambilini abenale nganekwane elandelayo:
«Qaphela, ukuphawula okulandelayo ukukuthatha ngamahlaya, anginalutho olumelene ne-LGBT»
Ngihlangana nemibono yenu. Ngicabanga ukuthi wenze kahle kakhulu ngokushiya phansi, noma ngabe umnikelo ubusezingeni lomuntu uqobo. Uma ungeyena nje umuntu "wezinsana", kufanele ucabange kabili, kathathu noma kane. URichard Stallman akayona indoda ejwayelekile, futhi lokho akushoyo nakwenzayo noma angakusho futhi angakwenzi, uStallman akakwenzi, i-FSF ne-GNU abakwenzi. Kwenzeka okufanayo nakuye. Kulimaze isisekelo. Ukuphela kweziphequluli engizisebenzisayo zivela emndenini wakwaMozilla, ukube lesi simo asixazululwanga, bekufanele ngishintshe iziphequluli. Futhi imishado, imishado ibingaphambi kweNkolo ihlaselwe kakhulu futhi yande kangaka. Angikaze ngishade eSontweni, kodwa ngishadile.
Ukuze abafana bangakulungeli ukushada ngoba lokho kuyisikhungo sezenkolo, i-bullshit, yiPolitiki kanye / noma i-Civil Institution. Ukube leli khasi belivikela umcabango wokufa esihlokweni, bengizoyeka ukulibuka. Futhi uma leli khasi linezikhundla ezingaqondakali ezindabeni, okungezona ezokuthi uMbuso ulivume noma ulimise. Sikhuluma ngamalungelo abesilisa nabesifazane okuthatha isinqumo ngawo. Uma leli khasi lingelona elalo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi nginephutha ukubhalisa.
"Iziphequluli engizisebenzisayo kuphela ezivela emndenini wakwaMozilla, ukube le nkinga ibingaxazululiwe, bekuzodingeka ukuthi ngishintshe iziphequluli"
Ingabe ilayisensi yesiphequluli ishintshile? … Ikhodi ivaliwe? … Ingabe ngokungazelelwe isiphequluli sisebenza kabi?
"Uma leli khasi belivikela umcabango wokufa esihlokweni, bengizoyeka ukulibuka"
Nginombono wami ngakho, uma ufuna ukuyazi, ngithinte nge-imeyili futhi ngizokuthokozisa ukukuthokozisa.
«Uma ungeyena nje umuntu" wezinsana ", kufanele ucabange izinto izikhathi ezimbili, ezintathu nezine. URichard Stallman akayona indoda ejwayelekile, futhi lokho akushoyo nakwenzayo noma angakusho futhi angakwenzi, uStallman akakwenzi, i-FSF ne-GNU abakwenzi. Kwenzeka okufanayo nakuye. Ulimaze isisekelo. "
Ngamanye amagama, lapho umuntu efake isikhathi esiningi empilweni yakhe esiza abanye, lapho othile enikele kakhulu esintwini, kwisoftware noma yini, ukuthi umuntu abe ngumuntu "ojwayelekile", ingabe umbono wabo kufanele uthule?
Lowo muntu akenzanga lutho ngaphandle kokusiza abanye, esikhundleni salokho, kufanele akhohlwe yinkululeko yakhe yokunquma ngaye nangezwi lakhe (usuvele wakusho: "sikhuluma ngamalungelo abesilisa nabesifazane okunquma ngabo") thula, ungavezi umbono wakho noma ukweseka "into" ethile (imbangela, umthetho, indawo, izilwane, njll)
Uxolo, kepha lokhu akunangqondo kimi.
UBrendan ukhululekile ukwenza noma yini ayifunayo inqobo nje uma ekwenza ngaphakathi komthetho. Akenzanga umkhankaso wokukhangisa, akazange afake igama lesisekelo seMozilla kulokhu ... uvele wanikela ngemali encane kuX into avumelana nayo, ukuthi uX akayona into engenabuntu njengokubulala izingane noma okuthile ngakho-ke, kumane kungenzeka (noma cha) kwabantu bobulili obufanayo ukushada ngaphansi komqondo "womshado."
Ngeqiniso angazi ukuthi inkinga engaka ivelaphi ...
Manje mina, njengomuntu nomuntu ngingubani nginikela ngama- $ 10 emthethweni othi ... angazi, ngokwesibonelo, ngijezisa ngenhlawulo engama- $ 40 kunoma ngubani othelele omunye umuntu umkhuhlane, ngoba ngibona ngathi akulungile, Ngabe lokhu kusho ukuthi i-DesdeLinux (iwebhusayithi engaphezulu kakhulu kwami) iyabandlulula abantu abanomkhuhlane?
Ngendlela, umbono wami mayelana nomshado wezitabane ulula, angiphikisani nawo. Lokho ngiyazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abanye bazocabanga ukuthi anginazwelo noma into efanayo ... angibathandi abashisekeli.
wonke umuntu wesaba ukungalungi kwezepolitiki, bahlala becacisa ukuthi "hawu angibobantu abathandana nabobulili obufanayo, angivumi nje kuleli cala," okuyihlazo ukuthi kunokweqisa okukhulu, okuyibo ngempela abangabekezeli
Ngizokusho lokhu kuphela, ngokuxolelwa kwezinkulumo zami kulabo abakhona ngenxa yobuqili bami obuncane:
Konke abakwenzile kulimaze iMozilla, futhi akukho lutho oluzobungazwa ngemuva kwale micimbi, ngoba bakhombise kuphela umbukiso omkhulu wokungabekezelelani kulabo abangacabangi noma ababelane ngemibono yabo.
«Lezi zinhlamvu ezi-egocentric kanye ne-hypersensitive eziduba umphakathi wezitabane (…) zikhombise kuphela ukubonisa okukhulu ukungabekezelelani kulabo abangacabangi noma ababelana ngemibono yabo.»
Kuphakathi kokuthi awuqondi ukuthi wenzeni uMnu. Eich, noma kungenye yezimpendulo ezimbi kakhulu ongazicabanga (okungukuthi: sekela ukuphawula okufana nalokho okusekelayo).
Ngaphezulu kwakho uthe uma umuntu womphakathi kufanele agcine umbono wakhe kuye, okuhle ukusho ukuthi awuwuqondi umehluko phakathi kokuba nombono womuntu siqu nokuthatha lowo mbono wakho kubumfihlo bakho, okunomthelela ngqo ezimpilweni zabantu abahlukile (kulokhu Kulokhu, abantu ababevinjelwe ukuthi bangashadi noma bathintwe ngenye indlela yilowo mthetho).
Uma, esibonelweni osinikezayo, unikela leyo mali kulowo mthetho ocatshangelwayo, futhi umthetho wamukelwa, kuzofanele ngikhokhe uma nginika umuntu umkhuhlane, ngakho umthetho ungena empilweni yami yangasese. Ngokusobala umenzi wobubi bekungeke kube u-FromLinux, kungaba nguwe, futhi njengoba ukhuthaza umthetho ongafanele onemiphumela emikhulu ezindlekweni zami ezithinta ngqo ezomnotho wami ngakho-ke izinkinga zami, bengizokuphikisa; Njengoba iDesdeLinux iyipulatifomu ehlala imibono eyahlukene, ngizoyeka ukufunda zombili izindatshana zakho nezitatimende ezisemthethweni, imibono noma yini evela kuDesdeLinux, ngoba noma ngubani obhale imibhalo emibili ufaka isandla ekwenzeni impilo yami ibe yimbi kakhulu. Ukwenza isibonelo sakho sihambisane kakhulu nenkampani / isisekelo, uma esikhundleni seplatifomu yohlobo lweDesdeLinux, ubusenhloko yenkampani eqala ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza, noma yini, izoma ukusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo walokho inkampani, ngoba njengomuntu ongene empilweni yami yangasese, futhi njengomholi waleyo nkampani wehlisela izinqumo zebhizinisi kwezakho, njengoba ungumholi nobuso bayo; ukuthi yize lezi zinqumo zingezona ezangaphandle ngokuphelele, angikwazi ukuzisekela zivela kumuntu ongithinta ngqo nezinga lempilo yami. Enye into kungaba ukuthi uma ubuqale ukwakhiwa kwalolo hlelo lokusebenza noma omunye umkhiqizo, futhi ubusushintshe izandla noma umthwalo wokuqondiswa kwalolo hlelo lokusebenza awuwele nganoma iyiphi indlela kuwe.
Iqiniso ngukuthi owamukela lo mnikelo esibonelweni sakho awusizi ekwakhiweni kwalokhu engifuna ukukusho, ngoba lokho akusho ukuthi kukhona ukuphazamiseka kokuziphatha phakathi kombono wakho nombono wami wokuthi kufanele ukhokhe ukuze uthelele othile.
Ngezansi ngakha impendulo yami esihlokweni esisikhathazayo:
Kungaba yinto eyodwa ukuthi ukuduba kube ngenxa yokuthi lowo muntu uyabazonda abathandana nabobulili obufanayo, okungahle kugxekwe kahle uma kwenzeka ezishaya isifuba ngalo noma ezwakalisa leyo mibono esidlangalaleni, eyisithombe sesisekelo esinjengeMozilla, kodwa kungenye into anikele ngayo imali, impela eyakho, ukuvimbela abesilisa / abesifazane ababili ukuba bangashadi, into eyeqa umbono womuntu futhi ngokuzenzekelayo ibe ukuphoqelelwa kwenkululeko yabantu beqembu elibathintayo.
Kufanele uwubone umehluko, ngoba noma ngubani ukhululekile ukuba abe nemibono yakhe, kepha okwamanje inkululeko yenkululeko ikhawulelwe yileyomibono yomuntu siqu, lokho ocabanga ukuthi akugcini kuwe kuphela, kodwa kuwena nonke. lezo ezithinta izenzo zakho.
EMozilla, njengoba sekushiwo, ukuvinjelwa kwemishado yezitabane kuthinte abasebenzi abangaphezu koyedwa: kuthinte ngqo, ngiyaphinda futhi ngiyabona, isinqumo sika-Eich sokunikela ngemali emkhankasweni wokuvimbela umshado wezitabane sithinte ngqo ngaphezu isisebenzi sesisekelo seMozilla, sisuka emibonweni yomuntu siqu engahlonipheki kodwa ebekezelelekayo size sigxambukele ezimpilweni zangasese zabantu abaningi, bese ufika ubiza abantu abathintwe ngumthetho we-UNJUST njengabantu abayizishoshovu.
Ngamafuphi, noma ngubani angaba nombono awufunayo, njengoba ngishilo, isikhundla odabeni kungenzeka singahlonipheki, kepha inqobo nje uma leso sikhundla sihlala ngasese sizohlala sibekezeleleka; Kuyinto ehluke kakhulu ukuthola, ngokulahlekelwa yile mibono, ezimpilweni eziyimfihlo zabantu abaningi, kunciphisa inkululeko yabo.
Umbono wakho awusebenzi kangako ngaphandle kokumisa imibono yakho, kungumbono wakho futhi akunandaba uma nje uhlala njengombono; Inkinga iza lapho lowo mbono uphuphuthekisa umqondo, ngoba ukuvikela ukuthi u-Eich akashiyanga isikhundla sakhe futhi wabiza umuntu onenkani noma ngubani ophikisayo ngoba umthetho u-Eich owasekela ngemali, ngqo noma ngokungaqondile, wawuthinta ngokuphelele awunangqondo futhi awunangqondo, kude nanoma yisiphi isizathu kusebenza mayelana nebhizinisi / umehluko ngamunye.
UBrendan Eich usulile emsebenzini eshiya iMozilla Ngabe kuyakukhathaza yini ukuthi iMozilla isilungisile nokuthi yacindezela uMnu. Eich ukuthi ayovala umoya? Yebo, faka ukuduba ngokumelene neFirefox OS noma isiphequluli sakho, isisekelo seMozilla yi-XD yangempela ebhekele lokho.
Ukuphawula kwakho nokufana nabanye kulula kakhulu ukukuqonda.
Okokuqala ukuthi awuyona i-LGBT, futhi awunabo abangani noma umndeni we-LGBT, ngoba ukube ubenabo, bebezoqonda kahle ukuthi njengamanje, ngisho nasemazweni aseNtshonalanga, kunzima ukuba yi-LGBT, ngoba bayaqhubeka nokubandlululwa, badelelwe, futhi kwesinye isikhathi babahlasele ngokucacile ngamazwi / ngokwengqondo noma ngokomzimba.
Okwesibili. Futhi kubi kakhulu. Umhlaba uncela abantu abanjengawe. Ngabantu abangenalo uzwela, ngaphandle kokuzwela ezinkingeni zabanye, nokuthi ningabantu abanobugovu kuphela abazicabangela nina kuphela.
Ungashiyi umhlaba wemidlalo yamavidiyo nama-manga, futhi uyeke ukuphawula ngezinto ongaziqondi.
U-Edouard Daladier kusho
Bengihlala ngizizwa ngikhululekile ngokwami ​​ukuba ngikuye futhi ngivikela umphakathi wamahhala wesoftware. Singabantu abahle emkhakheni wethu. Yithi esihlonipha amakhodi wokuziphatha angaphezu kwenhloso yezomnotho kanye / noma yezentengiselwano. Yithi esivikela ukuthi ukuvinjelwa kweTwitter kuyavinjelwa, yithina esivikela i-Intanethi ekhululekile nengathathi hlangothi. Uyazi ukuthi kwenzekani?
Yebo, iMozilla ingahle ingabi isiqinisekiso esihle kunazo zonke sefilosofi yoMthombo Ovulekile, kepha bekuyi-guarantor enhle. Ngisacabanga ukuthi iningi lethu linjalo. Futhi yingakho nginenkinga yokufunda kumabhulogi ahlukahlukene mayelana nokuthi yimbi kangakanani indlela uBrendan Eich ashiya ngayo.
Ngineqiniso ukuthi le ndoda ibingaba yisikhulu esiphezulu. Kepha mina, ngonembeza, angikwazi ukuxhasa umuntu ocwasa (noma kunjalo, izaba zokuthi kungumshado kuphela hhayi izitabane azisebenzi kimi). Angisho ukuthi nonke kufanele nibukeke kabi. Kodwa ngezindlela ophawula ngazo kubonakala sengathi bekukhona iqembu le-LGBT emnyango wendlu yakhe elishaya lowo owayenguMphathi Omkhulu we-Mozilla.
"... bahlulela (futhi balahla) umuntu ngezinkolelo nangemibono yakhe, evezwe ngokweseka uhlelo lomthetho, oluyingxenye yomdlalo wentando yeningi wanoma yisiphi isizwe sanamuhla esiphucukile."
Uma kusasa kuvela ukuthi umphathi omkhulu wakwaSony wakusho obala ukuthi uyawazonda ama-Arabhu (ukusho okuncane) futhi ubeka imali ephaketheni lakhe ukusiza uhlelo lwezomthetho olumelene nama-Arabhu ukuthi luvunyelwe ukungena eJapan. Ngokusobala ngeke ngithenge ifoni yakwaSony, futhi angizange ngikhuthaze noma ngubani ukuthi enze kanjalo. Futhi ukuduba okuthile kungaba yingxenye yomdlalo "wentando yeningi wanoma isiphi isizwe sanamuhla esiphucukile" njengelungelo lokuvota. Akuyona inqubo yobushiqela.
"Abantu ngaphambi kwezinzuzo" Uma umphakathi we-OpenSource ukhohlwa ukuthi silahlekile.
Futhi ngaphezu kwakho konke okushiwo ngaphambili. Akufanele sikhohlwe ukuthi abanye bebengambheki njengendoda efaneleke kakhulu. Kwakunabantu abaningi ababheja kakhulu kwamanye amagama abajwayele inkathi yeselula esiphila kuyo, lapho iMozilla isivele isemuva kwesikhathi.
Ngokwazi ukuzwela kwesihloko, ngithanda ukwengeza ukuthi ngiyethemba la mazwana awacasuli muntu. Ngikubhala ngezinhloso ezinhle kakhulu ukuzama ukuvusa impikiswano nemibono ebucayi. Ukubingelela.
Phendula u-oudouard Daladier
@ Édouard Daladier: «Kepha mina, ngonembeza, angikwazi ukweseka umuntu ocwasa (noma kunjalo, izaba zokuthi kungumshado kuphela hhayi izitabane azisebenzi kimi).»
Ngakho-ke ngiyakubuza, ngabe kudingekile yini ukuthi ubekezelele buthule ukuthi ezinye izinto zomphakathi we-LGBT uma zingabandlulula abanye ngemibono yabo uma kuqhathaniswa nezikhundla zabo? Ngoba yilokho kanye okwenzekile, lezi zakhi zomphakathi we-LGBT odube iMozilla ziye zacwasa u-Eich ngesikhundla sakhe somshado wezitabane. Ukukhuluma ngokuthi ulwa kanjani nobandlululo kuhle kakhulu, kepha ukukhuluma ngakho futhi ukukwenza njengoba kwenziwe, ngaphezu kwalokho kuyisenzo seziphukuphuku.
@ Édouard Daladier: «Uma kusasa kuvela ukuthi umphathi omkhulu wakwaSony uthe esidlangalaleni ukuthi uyawazonda ama-Arabhu (ukusho okuncane) futhi ubeka imali ephaketheni lakhe ukusiza uhlelo lwezomthetho olumelene nama-Arabhu ukuba luvunyelwe ukungena eJapan. Ngokusobala ngeke ngithenge ifoni yakwaSony, futhi angizange ngikhuthaze noma ngubani ukuthi enze kanjalo. Futhi lokho kuduba ikakhulukazi kungaba yingxenye yomdlalo "wentando yeningi wanoma isiphi isizwe sanamuhla esiphucukile" njengelungelo lokuvota. Akuyona inqubo yobushiqela.
"Abantu ngaphambi kwezinzuzo" Uma umphakathi we-OpenSource ukhohlwa ukuthi silahlekile. »
Ukulandela lo mbono wakho, lapho-ke kufanele uqale ukuduba kwakho manje, ngoba impela uzokwazi izimo ezingezinhle zokusebenza kwezinkampani eChina kanye neminotho eminingi yase-Asia, amacala ezisebenzi zezingane ezigqilazwe e-Afrika, phakathi kokunye ukungabi nabulungisa okuningi kwenzeke emhlabeni, futhi lapho ngandlela thile unikeze uhlamvu lwakho lwesihlabathi, ukuthi sizokwenza okuthile okwenziwe eChina oke wakuthenga, futhi lokho kuqhathaniswa nomqondo owethula lapha, kuyicala elifana nalelo u-Eich ukwenzile.
Sengikushilo lokhu, ngiyacacisa futhi, kuhle kakhulu ukulwa nobandlululo kepha asikwazi ukushumayela ngokulwa nokuthile esikusebenzisayo lapho izintshisekelo zethu zifakwa engcupheni, lokho abakwenzile ukuduba bekungalungile ngendlela enkulu, hhayi kuphela ngokwenza ukuduba, uma kungenjalo ukwesekwa kweMozilla ekuhlekisweni komphakathi, ukuzama ngokumelene nomphakathi wayo ukuthi ekugcineni yibo bonke abavumele iMozilla ukuthi ifinyelele lapho ikhona manje.
Kufanele ngiqale ngokukuphendula ukuthi usebenzisa ithoni ethile yokweqa. @Yukiteru «lezi zinto zomphakathi we-LGBT». Kubonakala kimi ukuthi unenzondo ethile ngobungqingili, yize ngithemba ngobuqotho ukuthi leli yiphutha lami futhi ngalokho ngiyaxolisa kusengaphambili.
Kuyiqiniso ukuthi leli yizwe eliyinkimbinkimbi, elinokungabi nabulungisa okungaphezu kwalokho okungalungiswa. Kodwa-ke, ngiyakwethembisa ukuthi ngenza konke okusemandleni ami ukukugwema nokubalungisa. Yingakho angizange ngidle eMcDonalds, eBurgen King noma okunye okufana nakho iminyaka emithathu. Angiphelele. Yebo, nginomakhalekhukhwini, imoto nekhompyutha. Kepha noma nini lapho ngifaka okuthile engikudingayo ngomkhiqizo owakhiwe ngaphansi kwezindinganiso zami zokuziphatha, ngiyayikhetha. Kungakho ngisebenzisa iLinux neFirefox isiphequluli sami kuze kube manje.
Ngokuqondene nento yokuqala ongiphendula ngayo, ngikholwa ukuthi noma iyiphi inhlangano inelungelo lokubamba iqhaza emdlalweni wentando yeningi uma izinhloso zayo zihambisana namalungelo abantu. Lowo ngumgoqo ongaphendukeki. Uma sithi bonke abantu kufanele babe namalungelo afanayo, asikwazi ukubekezelela umbono ohlukile. Ukubekezela akukhona ukwamukela yonke imibono ngeqiniso nje lokuthi "ukuba umbono." Ukubekezelela ukwazi ukuthi ungabeka kuphi umgoqo. Akuyona yonke imibono evumelekile.
Noma kunjalo, ngiyabona ukuthi iqiniso lokuthi kube nezakhi ezithile ngaphakathi kwesisekelo ezingatholanga ukuqokwa kwakhe zihlekisa nokuthi isikhundla sakhe sokulwa nomshado wezitabane yisimo esingeziwe, hhayi esikhulu, kuhlala kungaphawuliwe.
@ Édouard Daladier: "Ngicabanga ukuthi unenzondo ethile ngobungqingili, yize nginethemba lokuthi leli iphutha lami futhi ngiyaxolisa kusengaphambili."
Uhlanye njengoba besho ezweni lami, ngoba ngikubeka kucace lapha: * Anginalutho olumelene nezitabane *.
Nginabangane, abangane nomndeni osondelene kakhulu nami abangongqingili futhi angibabandlululi, futhi angizukubabandlulula nganoma iyiphi indlela, ngoba bangabantu engibathandayo, engibahloniphayo nengibaqondayo, engangivele ngibeke amazwana lapha kaningi, futhi ngiyayisekela inhlangano yabo uvuna amalungelo alinganayo. Kuthiwani uma ngingasekeli (futhi nginesibindi sokusho ukuthi abaningi lapha bayavumelana nalelo phuzu), amacala adlulele njengalawo lawa ma element (qaphela ukuthi ngikhuluma ngabantu abathile, bezinto *, hhayi zomphakathi * wonke (leqembu * labo) abenze lokho abakusolayo nabalwela ukukwenza ukuwa: * Bacwase omunye umuntu ngezinkolelo zakhe nangezikhundla zabo *. Ngakho-ke umbono wabo wokuthi nginokuthile okuphikisana nabo kunalokho kuwuphawu lobuthakathaka bezimpikiswano zabo, ngalo mqondo. Ngokuqondene nokuxolisa kwakho, okwamukelwe, ngincoma kuphela ukuthi ufunde izinto ngokucophelela, uhlaziye futhi uqonde ngaphambi kokukhipha impendulo.
Manje usukhuluma "ngomdlalo wentando yeningi", ake ngikutshele okuthile, yonke intando yeningi isuselwe kumgomo wokuthi * ukubekezelelana *, * ekuhlonipheni ukwehluka komuntu ngamunye *, futhi kulapho ngizibuza khona: ukubekezelelana kwalezi zinto zomphakathi we-LGBT owaqala ukuduba eMozilla ngoba nje uBrendan Eich engazisekeli izinhloso zabo ngo-100%? Uphi umgomo wokuhlonipha ukwehluka kwabantu abakha umphakathi wentando yeningi? Akekho ongaphika ukuthi uBrendan wasekela umthetho ophikisana neqiniso lomshado wobungqingili, futhi lokho akuyona into esekwe nguye kuphela, kwakukhona izinkulungwane mhlawumbe izigidi zabantu ababewusekela, ngoba wawuyingxenye yomdlalo wentando yeningi wase-USA ngalowo mqondo, Kepha, ngabe lokho kusho ukuthi wonke umuntu kufanele athole ukuhlekwa umphakathi? Impendulo yalokhu nguHAYI ocacile. Futhi qaphela ukuthi lesi siphakamiso asivunyelwanga yizinkantolo, hhayi ngenxa yalokho, sibona labo abesekela lelo hlelo (kubandakanya uBrendan) benza "ukuzingela kobungqingili belizwe", bephethe ipiki, ifosholo, amakilabhu namathoshi, ngoba emdlalweni ngentando yeningi abayiqalile, balahlekelwa, futhi umphakathi we-LGBT usungalithokozela ilungelo labo, ngemuva komsebenzi omningi ngaphakathi kohlelo lukahulumeni, okuthi, yize lungaphelele, okungenani lwenze izimo ezinjengalezi zenzeke.
Mayelana nomhlaba ogcwele ukungabi nabulungiswa kanye nezinkinga, ngalowo mqondo, akekho osindiswayo, hhayi nami, ngoba uma uthenga okuthile eChina, khona-ke abaningi emhlabeni bazothi uyakweseka ukukhula komnotho kwesizwe lapho abasebenzi abaningi bagqilazwe kancane ngakho-ke uyabuvumela ubugqila. Futhi uma uthenga okuthile e-United States, abanye abantu kulo mhlaba bazothi uyalisekela ngokwezimali izwe elithanda impi kakhulu nelingamakhosazana emhlabeni. Njengoba ukwazi ukubona, kuhle kakhulu ukukhuluma "ngobulungiswa", kepha iqiniso ukuthi noma ngabe sikubheka kuphi, umqondo wethu "wobulungiswa" uhlala usontekile uvuna noma ngubani owusebenzisayo noma onamandla, unjalo umhlaba futhi kufanele siphile nayo, ngaso sonke isikhathi sizama ukushiya umaki ongcono kakhulu, njengabantu nabantu njengathi.
Esimweni abaningi abangazange bathande ukuthi uBrendan wakhethwa njenge-CEO, iqiniso ukuthi abaningi bebengakuthandi, kepha bebayingcosana. Isimo * esikhulu * esidale konke lokhu kuduba kwaba; * Ukwesekwa kukaBrendan ngeProposition 8 *, ukube leso simo besingenzekanga, nginesiqiniseko sokuthi uBrendan usazoba yi-CEO yeMozilla.
Ikakhulu ekukhathazekeni okuvumelekile okufundile esigabeni sakho sokuqala.
Ngoba kuyamangalisa ukuthi usosayensi wamakhompiyutha onemvelaphi yokuqukethwe enikezwe ucwaningo olufanayo lwendawo yakhe yomsebenzi, akaqondi ukuthi ukungabekezelelani nokubandlululwa akukubi ngokwako.
Ukungakubekezeleli labo abahlaselayo akukubi, ukubandlulula labo abahlukumezayo akukubi, kuphambene impela.
Uhlelo olubekezelela amaphutha (ikhompyutha) ALUYONA olwamukela futhi luthuthukise amaphutha, lwenziwa lwazi ukuthi amaphutha awanakwenzeka ukuwagwema, kodwa ukuthi uma kwenzeka, ayalungiswa, ahlukaniswe noma anganakwa, ngokwesibonelo: a umkhakha omubi kudiski odala ukulahleka kwedatha nokuphazamiseka, awutshelwa - kuhle kakhulu, kuqhubeke, uphule amanye amafayela. Cha, NGOKUPHAMBanayo, BABANDlululiwe, bahlukanisiwe, bathunyelwa "EJELE", lapho kungekho muntu oxhumana futhi nalowo mkhakha owonakele futhi, futhi lokho kuhle, ngoba ukuqhubeka nokubhekana nalowo mkhakha kuveza ukufundwa nokunyakaza kwekhanda ngokweqile, futhi ekugcineni kugcina sekukhiqiza imikhakha emibi kakhulu.
Ibhekene nomehluko UKUBekezelelana. Yilokho labo ababekade beduba bakuswela, lapho bebona ukuthi uBrendan ngesikhathi esithile wayesekela izikhundla eziphikisana nemibono yakhe kanye nomgomo wakhe, baphuma ekulawuleni ukwenza impi ngaye, futhi phakathi kwakho konke babeka uBrendan neSisekelo ukuba bahlekise ngomphakathi. IMozilla, ethinta kabi isithombe nomsebenzi wazo zombili.
Lokho nakanjani akunakubizwa ngokuthi isenzo esivumayo, njengoba labo abasekela ukuduba bezama ukukwenza kubonakale, kunalokho kunikeza ukudla komqondo, ngoba bona, beyingxenye yomphakathi we-LGBT futhi bemukela imigomo yayo, basebenzise ubandlululo ukukhomba njengomuntu onobungqingili obungenanhliziyo (njengo-djio @nano) kuBrendan Eich.
Njengoba ngishilo ngenhla, enye into umbono womuntu siqu futhi enye into, ngqo noma ngokungaqondile, ukukhawulela inkululeko yeqembu, kulokhu ilungelo lokushada.
"Inkululeko yomuntu ngamunye iphelela lapho kuqala inkululeko yabanye."
Kulokhu kokugcina, akukho ukubekezelelana okungenzeka, ngoba lapho isenzo sakho sithinta omunye umuntu ngaphandle kwakho, inkululeko yakho iyaphela ngakho-ke ilungelo lokubekezelelwa, lizithethelela ngezenzo zakho.
Futhi lapha unephuzu elingabekezeleleki neze nesilo, ngiyaxolisa, kodwa lokho kokuthi "ukungabekezeli amaphutha alabo abalimaza noma ababandlululayo, njll." Kungukuthi, ngaphansi komqondo, kuyinto ecishe ibe yi-fascist.
Ngakho-ke ngaphansi komqondo wakho kufanele uvumele isigwebo sentambo? Ngoba ungithethelele, ungezi ukuzokhuluma ngesayensi yamakhompiyutha ngoba akukho ukufana okungenzeka. Ekusebenziseni ikhompyutha, akukho ukucatshangelwa okucatshangelwayo okungenangqondo ngokuphelele futhi okungabalwa, kukho amaphutha angabandlululwa, AYALUNGISWA noma AQEDIWE ... empilweni yangempela, lokho omunye umuntu abonakala engalungile kuwe wenza, akenzi izenzo zakhe iphutha elingenakugwenywa; empilweni yangempela ngeke ulungise noma uqede lowo muntu.
Ngakho-ke ukufana kwakho kunjalo, futhi uzongixolela ... udoti.
Yebo, kuwe nakomunye umsebenzisi ongisola ngokuba umFascist, kungakuhle ukuncoma ukufunda, hhayi umlando, okungenani isichazamazwi!
Nginokwanele ngokuchaza ukuthi iziphi izindlela ezingaqondakali kwesinye isifundo sokukufundisa ukuthi kwakuyini i-fascism.
«Bese ngaphansi komqondo wakho kuyadingeka ukuvumela isigwebo sentambo? »LOL, lokho ngamanga alula, ungicela ukuthi ngiphendule umbuzo onzima onempendulo ethile, futhi ongahambelani nesihloko. Impela ulinde ukuthi ngikuphendule yebo, ukuze, ngihlasele ukusolwa kwami ​​okusondelene nesigwebo sentambo, ngiphikise impikiswano yami ngodaba oluhlukile.
Kubukeka sengathi nami kufanele ngichaze umehluko phakathi kokufana / ukufana kuwe ngokufana. Hambani manje.
Awu, Mnu. IT, ngichazele uma, uma kwenzeka umkhakha omubi kwi-hard disk, ungakhethwanga ngokuwushiya ngaphandle. Ngoba leyo ncazelo iyona ncazelo yobandlululo, ayinayo incazelo engemihle, ngaphandle kwalapho kwenziwa khona ngezizathu ezephula amalungelo abantu.
Futhi kungaba kuhle futhi uma umnumzane wempilo yangempela, engichazela ukuthi iyijele elinezikhungo zalo zokuhlumelelisa nokuvuselela umphakathi, kukhona izindlela zokuziphatha ezilungiswayo ukubuyisela abantu emphakathini (Okusebenza kahle noma kabi kungenye indaba).
Impilo eningi yangempela, kepha kubukeka sengathi imfundo yakho ithelevishini kuphela, lapho uzwa nje ukuthi ukuqeda kuyabulala. Kwanele ukubasusa kokunye UKUQEDA inkinga.
Futhi akekho noyedwa owathi ukuqeda (Empeleni, KUPHELA OWAKHULUMA NALESO NKULUNKULU NGUWE, ngithe "LUNGISA, HLOLA NOMA UNGANAKI", kodwa-ke ukushintsha okushiwo elinye iqembu kulula) noma ukulungisa umuntu, kodwa inkinga, abantu abayona inkinga kepha izenzo zabo ezimbi, sekuphindaphindwe isikhangiso, u-Eich, ungakukholwa okufunayo, kepha lowo osebenza (ngqo noma ngokungaqondile) owephula amalungelo abanye inkinga.
Ngisho naku-ANALOGY ye-hard disk, umkhakha awususwa, leyo ndawo yediski ayizange ishaywe, yavele yahlukaniswa.
Uxolo ukungavumelani, kepha amagama akho athi "LUNGISA, HLOLA NOMA UNGANE" okwamanje ngingawabiza ngamagama amahle wezichasiselo ze- "DELETE", ukufunda isichazamazwi akukubi, ikakhulukazi uma sinamagama afanayo *.
“LUNGISA, UHLULELE NOMA UNGANAKI”.
Ekusebenziseni ikhompyutha kuhlukaniselwe kuphela ukutadisha inkinga, iphutha ... lapho-ke uma kungenakulungiswa, kwenziwa ukwehla bese kuvaleliswa. Yilokho ongakuqondi kusuka ekufaniseni kwakho, ukuthi ngaphakathi kwekhompyutha uma kukhulunywa ngamaphutha, yonke into ifingqwa ngezenzo ezimbili ezingenzeka kubo: ukulungisa noma ukuqeda, ukuziba? Iya, hamba, wenze uhlelo bese ungawanaki amaphutha, bese ulindela izimpama kumphathi wakho.
Lokho ongaqondi ukuthi abanye nabo abanephuzu elifanelekile abaphikisani namalungelo abanye. Futhi ukuthi abantu abayizithutha njengawe bangikhungathekisa, kuyangicasula impela uma othile eziveza njengomvikeli wento ethile ezindabeni zokuziphatha lapho sibhekene nesimo esicace bha ukuthi siphikisana nazo zonke izibani ngoba izenzo ezithathiwe ziphikisana ngqo nalokho iyazivikela ...
Ngabe kufanele ngiphindaphinde izinto kuwe? Angicabangi.
"Lokho u-Eich wenze okuthile okuzama ukwephula amalungelo ezitabane eminyakeni eyi-8 eyedlule", oh nkosi yami futhi basesekuleso sikhathi esibi, akekho ongitshele okwamanje wenzani lo mshophi NAMUHLA ukuze adubuleke, bayiduba iFirefox, futhi bayiduba ngokufanele, njengaku-OkCupid Ngabe lokho bekudingeka? Manje-ke, ake ngikuphendule ngo "yebo wakho, ngoba amalungelo awo wonke umuntu blah… blah", inkinga ebabazekayo ukuthi ukhuluma ngamalungelo abo bonke kodwa ubakhiphela ngaphandle labo okungabafanele ukuzivikela ngenxa yokuthi bazibophezele, ngesikhathi esithile, a ukoniwa. Okudabukisayo ukuthi okwenziwe ngu-Eich kudala kangaka kwase kumenyezelwe kungahambisani nomthethosisekelo, eminyakeni emine eyedlule kube yiqiniso futhi akasakwazi ukwenza lutho ngakho. Okudabukisayo ukuthi akenzanga lutho kumuntu ngenkathi engena eMozilla, ukuba khona kwakhe nje kukhubekise iqembu labantu abane-diaperitis futhi ngokudabukisayo, lelo qembu labantu ligcina lithathe isenzo esigxekwe ngisho nabantu abavela eqenjini elilodwa ... impela ngoba bekuhlekisa ngokungadingekile.
Ngakho-ke, Mnu. Moralist, gcina ukufanisa kwakho kungasebenzi, sebenzisa noma yini oyithandayo, kepha uma usebenzisa ikhompuyutha akukho ukufana okungenzeka, i-computing, ukuyibiza ngandlela thile ngokuthi "ayinazwelo," ibiza ama-shit inqobo nje uma injalo. ukuthi uhlelo lwakho luyasebenza futhi unamathela kumbono owuthandayo, akukho okufudumele, noma kuyabanda noma kuyashisa, akukho mpunga ...
Konke lokhu kimi kungukuthukuthela, "kufanele ubakhokhise kuwo wonke umuntu owake wenza okuthile kimi, noma wazama, kufanele ubambe igqubu", ufike ungitshele ukuthi konke lokhu akwenziwa ngegqubu , ukuthi ngiyakubona uvikela izizathu "zokuziphatha nokuziphatha" kwakho konke lokhu.
Ngiyasithanda lesosifaniso osanda kusenza nemikhakha eyonakele yediski eqinile, kusobala ukuthi ithokozelwa kakhulu, ikakhulukazi phakathi kosopolitiki abakhona "abathuthukayo", okuthi ngenkathi besephikisayo bahlale besola ukuthi bayacwaswa, bayahlukunyezwa futhi Abakhiphi, kepha ngokushesha nje lapho sebethathe amandla basebenzisa ukukhishwa okuqinile kubo bonke labo abangahambisani nemibono yabo, kepha hheyi, kufanele kubhekwe ukuthi bakwenza lokho ukuze kuzuze "izinto ezinkulu."
Futhi ukuthatha elinye lamaparele osinika lona «Kwanele ukubasusa kokunye UKUQEDA inkinga»; Ngempela-ke amaNazi ayengekho mabi kangako, kuphela "ahlukanisa" amaJuda, ongqingili nabantu abahlukile "ukuqeda inkinga", ngendlela, ngiyazi enye indawo lapho bezame futhi "ukuhlukanisa nokulungisa" ongqingili futhi abakaze baxolise nakulokho abakwenzile, impela, abantu abafanayo abakwenzile manje bama njengabakhulumeli babo. Uma ungazi ukuthi ngikhuluma ngani, ngingakucacisela ngasese ukuze uqale umkhankaso njengamanje ...
Abangaphezu koyedwa kini bagcwalisa umlomo besebenzisa isichazamazwi, bese bezama, ngokusebenzisa umbhalo esimeni esicacile, ukuthethelela izinto ezinjengeNazism.
Yebo, uYukiteru, nano noCharlie-Brown, ekuqaleni kwenkulumompikiswano uvikele umbono - ngokwami ​​okungenangqondo - umbono wokuthi abantu abakhethe ukuduba bangamashoshovu; manje angiboni lutho ngaphandle kwedemagoguery namagama amahle angasho lutho.
Njengoba sekushiwo kaninginingi, umfana angazonda ongqingili ngangokunokwenzeka, angafisa ukufa kwezitabane, angafuna ukudla izingane nanoma yini ayifunayo, ngasese.
Okungafanele kwamukeleke nokho ukuthi isisekelo esinjengeMozilla sinomlingisi omkhulu we-CEO, okuthi, kunokuba abe nemibono, asebenzisane (noma abambisane) ukuze abantu abathile babe namalungelo ambalwa; lokho, bangani bami, akuhambisani nomthethosisekelo (njengoba, ngaphezu kwalokho, kwamenyezelwa ngemuva kweminyaka). Ukuze ngokuhamba kwesikhathi ubize abashisekeli.
Emibhalweni yakho, ngiphinde ngabona ukuthi, futhi, ngokweqile, uzibuza kanjani ukuthi wenzeni namhlanje ngenkathi usola umphakathi wobungqingili ngokubambelela esikhathini esedlule. Kulowo mphakathi, kwakudingeka ukuthi kube nzima ukuthi ngesikhathi lokhu kugudluzwa kobulungiswa kuqhubeka, babecwaswa ngokomthetho (hhayi ngokusemthethweni, iso). Namuhla kungenzeka ukuthi akenzanga lutho, kepha njengoba ubungqingili bungathathi hlangothi futhi bungenzi lutho, kanjalo nobungqingili. Noma ithi ayenzi lutho, okungahle kube yiqiniso, ayisiqinisekisi leso sikhundla.
Alibambeli igqubu. Ngeqiniso angazi ukuthi kungani kungekho muntu okufanele asebenze ngaphansi komuntu ongagcini ngokukubandlulula ngawodwana, kepha ozama ukukubandlulula ngokusemthethweni (futhi kusebenza nokusebenzisa imikhiqizo yabo).
Futhi okwenziwe akulona icala. Kuyisenzo esiqondile. Vele, imibono evikelwe yile ndoda yamenyezelwa ingahambisani nomthethosisekelo, bekungeke kube ngenye indlela. Futhi ngokudabukisayo futhi akukho okufana nalokho, uMnu. Eich waphulukana nelungelo lakhe lokubekezelelwa nokuhlonishwa lapho eshiya ekubeni nombono wakhe wokuzama ukulwa nenkululeko yeqembu elithile; Lowo mzuzu ushintsha yonke into, ngoba ngiyakwazi ukuba nemibono yami, futhi inqobo nje uma zihlala kubumfihlo bami, akekho umuntu okufanele anakekele, kepha angingeni ezimpilweni zabantu.
Ngikubonile futhi lokhu kuqhathaniswa ne- "progressives" yamanje, ngaphandle kokuwela ekuqhathaniseni ukuthi impikiswano yakhe isuselwa ekuchotsheni imibono efanayo kwaleyo "nqubekela phambili".
Bese kuba khona lokho kuqhathanisa okuyihlazo nobuNazi okususelwa emagameni asetshenzisiwe. Olé. Ngenkathi umuntu ekhuluma ngo- «ukususa», ngomqondo ohluke ngokuphelele ekuphawuleni engikubhekise kuye hhayi ngalawo magama, i-homophobe esesikhundleni sayo esidlangalaleni njenge-CEO nobuso beMozilla, omunye uphuma eqhathanisa leso senzo nobuNazi hhayi Ngiyazi yini enye.
Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi kuyinto evamile, izimpikiswano ziyaphela, ngoba ngakolunye uhlangothi kusobala lapho uzama ukuvikela okuthile okungenangqondo, futhi kusala kuphela ukukhipha izinto kumongo (njengoba kungenzeka ukwenza ngezingxenye zamazwana ami) futhi usebenzise amasu ajwayelekile demagogic ngenhloso yokuvikela okungenakulinganiswa.
"Ngaleso sikhathi amaNazi ayengekho mabi kangako, avele" ahlukanisa "amaJuda, ongqingili nabantu abahlukile ukuze" kuqedwe inkinga "
Kusukela ekuqaleni umbono wakho awulungile, ngoba sengivele ngakusho kaningi ukuthi ukucwasa kubi futhi akulungile uma kwenziwa ngenxa yezizathu zobandlululo, ukucwaswa kwabokufika, ubungqingili, njll. Futhi esibonelweni sakho, amaNazi impela ayenezinhloso ezinjalo.
Yebo kepha noma yini ofuna ukuyibiza ngayo, isebenza kuwe kuphela.
Ikakhulukazi uma ungaqondi ukuthi igama linezincazelo ezahlukahlukene futhi linamagama afanayo.
Okushoyo kuyisibonelo esicacile sokuthi kungani ukhathazekile ukuthi ososayensi bamakhompiyutha abanjena, bahlose ukufaka izindaba ezingaphezu kwesayensi yekhompyutha.
«Bese kuthi uma lokhu kungalungiseki, kwehla iconsi bese kuvaleliswa.»
Ngingacabanga ngendlela ethakazelisa kakhulu yokusho into efanayo ngamanye amagama, mhlawumbe ngeyodwa nje nangeSpanish. XD
"Hamba, hamba wenze uhlelo bese uziba amaphutha"
Ungaphambukisi amazwi ami:
"Uhlelo olubekezelela amaphutha (i-computer) AKULONA olwamukela futhi lukhuthaze ukwehluleka, iqiniso ukuthi ukwehluleka akunakwenzeka ukukugwema, kodwa ukuthi uma kwenzeka kwenzeka LULUNGISELELWE, LUDLULISELWE NOMA ALUNAKIWE,"
Ikuphi "Ukulungisa nokuhlukanisa" ngaphambi kokushoyo?
Eqinisweni, isibonelo sohlelo olwenzayo yilolo ophendula kulo, lapho isiphequluli singakwazi ukulanda isithombe, asihlali sizama ukuhamba ngamabhayisikili, ASIFUNDI IPHUTHA, ngoba liyakhathazeka ukuthi ngeke lilandwe, cha, liyaqhubeka nje qhubeka ngokunikela ngekhasi.
Njenge-chrome nomyalezo wayo wenkawu ongenangqondo ovelayo lapho okuthile iwindi / ithebhu yehluleka, vele unqamule intambo, ungayinaki inkinga, ukuze uqhubeke nohlelo luvulekile.
Njengalapho amawindi athola iphutha elingalungiseki nelingabonakali futhi aqala kabusha uhlelo, futhi manje ngezinguqulo ezintsha ezinokubekezelelana okukhulu kwephutha, kuphela izingxenye ezibandakanyekile ezi-ISOLATED ne-ANNORED ukuze i-OS iqhubeke nokusebenza.
"Kwenzenjani kanti NAMUHLA ukuthi adubuleke"
Kufanele futhi ngiqonde ukuthi njengo: -yini i-fuck engiyikhathalelayo engiyenzile NAMUHLA ukuze idutshulwe?
Noma ngingakuphendula, ukuze kuthi kamuva, ngingenandlela yokuphikisana nayo, uthi: -Kodwa anginendaba, bengikhuluma nge-blah blah blah ...
Futhi ngabe kulotshiwe lapho ukuthi bekufanele kube okuthile kusuka NAMUHLA ukuze kuqinisekiswe ukuduba?
«Futhi yaduba iFirefox ngokufanele, njengaku-OkCupid Ngabe lokho bekudingeka? »
I-LOL, kuleli khasi, abasebenzisi abangena ngenethiwekhi ye-TOR BAKHUNYANYISIWE (le ngeke kube yindawo lapho bexoxa khona ngokuhle noma ngokubi), ngoba umuntu ongu-1 uthumele imiyalezo enokuqukethwe kwezepolitiki okungabekezelelani kakhulu. Uyakhumbula? Lapho, ngenxa yokwehluleka kwakho ukunikeza isisombululo sokwenza inqubo yokuqeda ugaxekile, ushayele ihlombe isilinganiso.
«Kuyafaneleka shit noma ngabe kuyini inqobo nje uma uhlelo lwakho lusebenza futhi unamathela kwiparadigm oyithandayo, akukho okufudumele, noma kuyabanda noma kuyashisa, akukho mpunga ...»
Ukukwazi kwakho ukuyichaza kukhombisa ukungayiqondi kahle leyo ndaba.
Qedela iziqu zakho, thatha izifundo ezinjengezinhlelo zokusebenza, ama-OS asatshalalisiwe nama-OS wesikhathi sangempela. Kamuva, sinezincwadi zikaTanenbaum (noma noma ubani omthandayo), sakhuluma ngokuthi entweni eyisisekelo njengokwabiwa kwezinsizakusebenza, umbandela owodwa awusetshenziswanga, ngoba alukho uhlelo noma indlela ephelele, kusetshenziswa amalambu omgwaqo, amawashi, amathokheni futhi okunye.
Futhi yeka ukuhlasela ukufaniswa bese ugxila kumqondo ongemuva kwakho, ungazungezi iqiniso lokuthi ubandlululo lubi kuphela uma ulwenza ngokumelene namalungelo abantu abanye.
Futhi-ke, uma kuwena kungukucasuka, ayikho impikiswano, lowo ngumbono wakho.
Uma ufuna kube ngaphezu kwalokho kuzodingeka wethule ubufakazi.
Okufanele ukwenze ukubeka amanye "ama-guarimbas", amanye ama-miguelitos, nezintambo zensimbi ngokumelene nomphakathi we-LGBT? yilokho "umqondo" wabanye ongakwenza,
ukuduba "okungabazekayo" uma kukhulunywa nge-firefox, kwezepolitiki "abanye bakubona kulungile".
Muntu, ekugcineni umuntu osusa inkoleloze egameni ukubandlulula.
Ngabe akukho ukubandlululwa lapho kwenziwa indinganiso yento ethile?
Ngabe lokho kubandlululwa yigama elithola incazelo ngokuya ngomongo. Uma sibhekisa kwikhompyutha, ikhodi ebandlululayo imane isuse amabhulokhi alimele noma angahlanganisiwe kwimodyuli yakho, ayikho indawo yanoma yimuphi omunye umugqa womcabango noma wencazelo.
Kepha uma sibeka igama ukubandlulula kumuntu, izinto ziyashintsha. Inkinga ukuthi, ijwayele ukuphenduka i-spaghetti enegazi ngokuya ngesimo.
Konke lokhu kufingqwe ngendlela ebhedayo kunazo zonke.
Ngibingelela kubo bonke, uCharlie akakwazanga ukuvumelana kakhulu, lapha kuphela abalimele abasebenzisi beFirefox, iMozilla iyadidizela futhi manje nalokhu ngaphezulu, angazi ukuthi ibhodi leMozilla kanye no-Eich uqobo bacabangani lapho benza lokhu okulungile kwezepolitiki ”, ngoba ayikho inkampani okufanele ilawulwe yizinhloso zabantu besithathu… kodwa ngamafuphi, kuzofanele sigcine iso lethu kuMphathi Omkhulu olandelayo weMozila…
"Ayikho inkampani okufanele ilawulwe yizinhloso zabantu besithathu ..."
IMozilla akuyona inkampani, futhi uma ufunda futhi uqonde imanifesto yabo uzokwazi ukuthi lezi "zinhloso zezinkampani zangaphandle" zihambisana kakhulu nezabo.
Eminye imiphakathi ibekezelela ukuthukwa izinsuku ze-xD uma nezinsuku uma i-xd, ngokwesibonelo amaKatolika, futhi ibekezelela i-XD ... (ngikhuluma ngeSpain). Lokhu kwaba ukunqoba kokweqisa.
"Lokhu kube ukunqoba kwabashisekeli."
Okubi kwabaningi, induduzo yeziwula. Basho lapho.
Ubuqili obujwayelekile besikhangiso se-populum.
Manje kuvela ukuthi ngoba amaKhatholika asendaweni engu-X amelana nokuthukwa (okuhambisana nokuba ngumKatolika (ukuphendula esinye isihlathi)), abanye kumele bakubekezelele ukuthukwa nokwephulwa kwamalungelo abo.
AmaKatolika abekezelela ukuthukwa? Bheka oFakazi BakaJehova kanye nezinkulungwane zezimemo abanazo kwi-intanethi, bese ungitshela ngokubekezelela ukuthukwa.
Ngubani ofuna ukwenqabela amaKhatholika ukuthi angashadi?
Angikholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa uma uMnu. Eich enikele ngemali ukuxhasa uhlelo lomthetho lokubandlulula ngale ndlela amaKhatholika, njengoba ayehlose ukulwa nezitabane, nami ngabe nginephutha.
Phendula empumelelweni yakho
Uhlobo oluhlangana nabantu bobulili obufanayo alusebenzi ngesikhathi. Akukho okuzovela kwabesilisa ababili noma abesifazane ababili ...
Kepha ungakhathazeki, ubuchwepheshe kungekudala buzovumela ukwephula lowo mkhawulo futhi bazojabula kabili.
Woza, manje kuzovela ukuthi iSonto LamaKatolika eSpain bangcwele abemukelayo nababungazayo. Ukukholelwa enkolweni akuyona into embi, ukusekela iqembu elifana neSonto LamaKatolika eSpain elingu-fascist (kanye ne-fascist ngezizathu ezingafani nalokhu ngenhla, ukuthi ubiza noma yini i-fascist), ubuhlanga nobulili, ngoba iqiniso libi.
Isikhungo esabela izakhiwo zombuso ngoba yebo, esibandlulula abesifazane, esisekela futhi sisekele ubushiqela, esingena kakhulu kwezepolitiki kunokuba sikhuleka, sizobe sithola umninikhaya. Kamuva, lapho bekhankasela ukuthi kumakwe ibhokisi le-X, bethatha lokho akwenzayo kwezenhlalakahle, okuyi-2% kuphela yemali esetshenziselwe yona. Bonakalise ibhange lokonga ngokuqola abantu, YEBO, IBANDLA LAMAKHATHOLIKI.
Umphakathi wamaKhatholika uthola imixhaso ngaphandle kwesizathu, awuyikhokhi i-IBI yamabhilidi azuza ngawo (into "engekho emthethweni" ewela ngaphansi), ivikela onondindwa futhi ibafihle (futhi angibhali, nginecala eliseduze, umamekazi umpristi wedolobha lakhe ekilasini welulela abafundi bakhe cishe iminyaka eyi-8), ufundisa izingane ezikoleni zazo.
Ngikushiya lesi sithombe esimele amaKhatholika aseSpain. Futhi ngendlela le nkunzi mayelana nokuthinta amaqanda amakholwa yi-bullshit, abacabangayo banenkinga enkulu kunamakholwa.
Siyabonga ngokufanisa okwenzayo nesonto, wethula uchungechunge olude lwezinkinga leso sikhungo esinalo, ulengise ama-epithets ambalwa ahambelana kahle nerekhodi lawo lamaphutha; Kepha manje, ngokususelwa kusibonelo osinikezayo, ngabe kungalungile yini ukuqala umkhankaso wokulwa nomuntu omelana nomuntu "othikha ibhokisi le-X" njengoba usho emazwaneni akho? Ingabe leso senzo sizomguqula lowo muntu abe ngumuntu othanda ukulwa, ononya, njll. Ngabe ucabanga ukuthi kulungile (qaphela ukuthi angisho ukuthi kusemthethweni) ukuphoqa lowo muntu ukuthi alahle izinkolelo zakhe ngenxa yalokho okwenziwa yisikhungo esithi simele inkolo yakhe? Akusikho ukuthi lapho lowo muntu enikela esontweni benza kanjalo ucabanga ngeCaritas hhayi ngeVatican Bank?
Akuwona wonke amakholwa acabanga njengo gogo wami, owathi "... uma uNkulunkulu ekhona yonke indawo angidingi abalamuli." Futhi ngerekhodi, ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu akekho.
Abakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu bathola okungaphezu kokuthukwa "ngokwesibonelo amaKatolika" kuwo wonke umlando.
Hhayi-ke, njengoba amaKatolika ayengaziphethe kahle, ngakho-ke masibe ngamanyala amaningi, sibe yisizathu sokuphila isikhathi eside.
PD: Labo abahlupheka kakhulu kumaKhatholika kwakungebona abangakholelwa kuNkulunkulu, kodwa ezinye izinkolo.
Uma bekufanele ngenze okwenziwa ngamaKhatholika, bekuzofanele ngakhe amalangabi angaphezu kwelilodwa ngibasole ngobuthakathi. Abakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu bafa behlushwa ngamademoni yizinkolo eziningi, befihlwe emthunzini ukuze baphephe. Izinkolo zencwadi ngokuyisisekelo ziyefana futhi zilwela ukulawula umhlambi.
Akekho umuntu okufanele athathe ilungelo lokugxeka (ngaphandle kokungahloniphi) labo abakholelwa kwizipoki, ama-unicorn, imikhovu, amadimoni, izivakashi ezingaphandle komhlaba, amadoda ahlakaniphile, i-mouse encane perez kanye nonkulunkulu abahlukahlukene. Ngeke ngiyithathe eyakho lapho ufuna ukuhlekisa ngabahlubuki (kodwa alukho udlame ngiyacela). Konke okugxekayo ukugxeka kubonakala kungenacala kimi, inkinga iza lapho isilima sithi "asenze okuthile." Ngingomunye walabo abagcizelela amaphutha emisebenzi yezinganekwane ababeka phambi kwami, akunandaba ukuthi ngabe ivela eTolkien, Marvel noma eBhayibhelini. Uma izenzo noma izinkolelo zethu zingalimazi abanye, akufanele sizizwe sinecala. Uma wenza izinto (wazi) ezilimaza abanye, ufuna izinhloso ezingaziwa, khona-ke uyasuka kuJesu (noma izimiso zokuhle ze-Amador) futhi i-shit ingakusakaza. Phila udedele, bese ugxeka okufunayo.
Khuluma kabili njalo emilayezweni yakho
«I-Pandev92 | 1 usuku olwedlule |
isikhathi eside siphile!
Kuhlala kukubi ngaso sonke isikhathi ukuthi umphathi omkhulu wesule esikhundleni ngoba kuhlwanyela ukungaqiniseki, ikakhulu ngesikhathi esengomunye wabasunguli beFirefox abekade esebenza kusukela ezinsukwini zaseNescape. Futhi nokuvelela kube ngumakhi weJavaScrip obalulekile kuziphequluli.
Ngaphandle kwalokhu kube ukunqoba kokuziphatha kwabanye, kungukuthuthuka kweFirefox okulimazayo.
@miguel: «Ngaphandle kwalokhu kube ukunqoba kokuziphatha kwabanye, kungukuthuthuka kweFirefox okulimazayo.
Ake sibone, yini ukunqoba kokuziphatha ngemuva kokubandlulula umuntu ngezikhundla zakhe zokulwa nomshado wezitabane?
"Ukunqoba" kulele ekutheni empeleni "ubulungiswa benzelwa" okuthile okwenzeka eminyakeni eyi-8 eyedlule nokuthi namuhla kumenyezelwe kungahambisani nomthethosisekelo, namuhla kunesisindo somlando kuphela somzamo ohlulekile wokunciphisa amalungelo abanye abantu futhi lokho kukhombisa ukuthi Ngaleso sikhathi uBrendan wayenephutha, yebo.
Manje, lokho kufanele kuthinte ini iMozilla namuhla? Pana, uBrendan wami uyajuluka, iSisekelo siyangilimaza kanye nabo bonke labo abathinteka yiso abebengahambisani nokuduba noma ukuletha izindaba ezimbi kangaka esisekelweni esinomgomo owodwa: sinikeze ilungelo lokuba newebhu evulekile evulekile ukuthi kancane kancane isebenza njenganoma yiliphi ilungelo lomuntu, kepha impela manje i-jockey iza izongitshela ukuthi lokhu kungaphansi kweqoqo le-LGBT elizwela kakhulu elibhekiswe ekwenziweni kwalo.
@nano angilishiyi eceleni iphuzu lokuthi lesi simo sonke sithinte kabi iMozilla, umphakathi waso kanye nesithombe saso emhlabeni wonke, leyo yinto engeke nje yangazitshwa, ngakho-ke umbuzo wami ubuqonde ngqo futhi ufushane: Yikuphi ukunqoba kokuziphatha okhuluma ngakho lapho usebenzisa inkemba yokungabandlululi, bese ugcina usubandlulula? Ngokuthi akukho ukunqoba kokuziphatha, kuyisenzo nje esigcwele ubuzenzisi.
Ukuthi uYuki ubizwa kanjani ukuphinda, ilula futhi iyisicaba. Manje asethembe ukuthi uMnu. Morales uzolungisa.
Angicabangi ukuthi kuwukubandlulula noma ukuzonda abathandana nobulili obufanayo nokungasekeli umshado wezitabane.
Umshado uyisivumelwano senhlalo esenziwe ngumphakathi, futhi ngemuva kwamakhulu amaningi eminyaka kuyaxoxwa futhi kuphikiswana ngakho ukuthi kubandakanywa noma cha ukufaka abantu bobulili obufanayo.
Njengoba ngikutshelile, kuyingxoxo, futhi asikho isikhundla esiyingqayizivele, ngakho-ke akekho umuntu ongabeka isikhundla sabo kwabanye ngokungenasizathu.
Angihlanganyeli nokuthi i-CEO ixoshiwe ngenxa yombono wayo ezindabeni zenani eliphikisanayo emphakathini, njengoba nami ngingahlanganyeli nokuthi othile waxoshwa ngenxa yokweseka umshado wobungqingili.
@miguel: "Angicabangi ukuthi kungukubandlulula noma ukuzonda abathandana nabobulili obufanayo ukungasekeli umshado wobungqingili."
Nami ngikholelwa okufanayo, izikhundla ezinjengalezi zinzima ngandlela thile ngoba ngokungangabazeki zifaka izikhundla eziningi zamasiko nezenkolo ezinamakhulu eminyaka zigxilile nokuthi abantu abakwazi ukumane balahle ngobusuku obubodwa, kepha ngokuqinisekile ukuqala kokwamukela. umshado wezitabane uzoza emiphakathini ngesikhathi esifanele. Ngokwami, umndeni wami umelene nomshado wobungqingili, kepha ngiyawuvuna, futhi yingakho ngiduba noma ngibiza umndeni wami ukuthi unabazondo bobulili obufanayo, ngoba kunabangani abayizitabane abahlonishwayo nabahlonishwayo.
Kuwubandlululo, awunikezi imibhangqwana engqingili amalungelo afanayo nalawo athandana nabantu bobulili obufanayo.
Umshado unikeza izindawo eziningi ngokwemithetho namalungelo.
Uma siya ekubandlululweni olumsulwa nolunokhahlo sonke sizalwa sibandlulula. Ngesinye isikhathi empilweni yethu siye sabandlululwa ngenxa yesizathu esithile, noma saba nendima yababandlululi, ngoba ngiyaqiniseka ukuthi kwesinye isikhathi siye saba nemicabango efana nale: "Lokho * cani * kusuka ku-mi3r # 4", noma "That * reggaeton * ka ... nomthambeka wakhe womculo "noma okubi kakhulu:" Lokho * kubambezelekile * ... ", ngasinye salezi zinkulumo KUNOBANDlululo, futhi ngingaqhubeka nokuqamba ezinye eziningi kepha akusasebenzi.
Iphuzu lapha ukuthi awukwazi ukusho ukuthi umuntu ongawusekeli umshado wobungqingili uyabazonda ongqingili, ngoba phakathi kwakho konke lokho isikhundla sakhe siqu kunezinye izinto eziningi umuntu angenakukunciphisa, futhi okubaluleke kakhulu kulezo zinto eziguqukayo kuyinkolelo yenkolo. Inkolo inamandla amakhulu kubantu nasezinhlanganweni zabo zenhlalo kusukela ekuqaleni kwesikhathi (okungeyona nje into oyibonayo), futhi yilokho, okuthi uma kwenzeka * umshado wobungqingili * uvezwa njengodonga olukhulu ukudiliza, ngoba ukukwenza amandla amakhulu aleyo mibono avele amukele okusha, kuvumele ukusungulwa kohlelo olusha lomphakathi, lapho umshado wobungqingili wamukelwa ngaphandle kwezinkinga.
Kumuntu obesebenzela isoftware yamahhala, ekugcineni esikhundleni sokugxeka kakhulu, bebebuza kakhulu.
Wayesebenza eNescape futhi noma iyiphi inkampani yayizolwa naye ngokuba ngumqambi we-javascrip, kodwa wakhetha ukuqhubeka nokusebenza eFirefox, ehola kancane kakhulu, futhi bamkhokhela ngaleyo ndlela. Yize waxolisa, akuzange kudlulele nakubo.
Bezikuphi izishoshovu zentando yeningi zokucela ukwesula kwe-CEO yeGoogle ngokusatshalaliswa okukhulu akwenza ne-NSA?
Wawukuphi umphakathi wezitabane ukubhekana neSenator enamandla yeRiphabhulikhi yemithetho yobungqingili?
Luphi uxolo olucelile?
"Bezikuphi izishoshovu zentando yeningi ezazifuna ukusula kwe-CEO ye-Google ngokwenzelwa okukhulu kwe-NSA?"
Beningazi yini ngoSuku Lomhlaba Wonke Lwenkululeko Ye-inthanethi? Babelapho.
"Wawukuphi umphakathi wezitabane ukubhekana neSenator enamandla yaseRepublican ngemithetho yobungqingili?"
Ukusebenza nokulwa njengezinsuku zonke, ukuthi abangeni endlini yakho ukushiya amapheshana akusho ukuthi abenzi lutho.
Ngizokubeka lapha lapha:
Futhi ukuxolisa kwakhe:
Izixhumanisi zakho ezimbili zokuqala azisebenzi, ziyaheha kodwa azisebenzi.
Okuthakazelisa kakhulu kimi kungokwesibili, ngenxa yalokhu:
«Enye indlela kungaba ukuzama ukwenza iMozilla njenge-STRICTLY BUSINESS-LIKE ne-STERILE ngomzamo wokugwema zonke izingqinamba. LOKHU AKUFANELE UKULINGANA NOMOZILLA. Uma siba yinyumba sizolahlekelwa yingxenye YOKUQALA KWETHU. Umphakathi iqoqo lobudlelwano futhi uhlanganisa OKWENGEZIWE KWEZINDAWO ZOKUTHUTHUKA EZIDINGEKA NGOKUQINISEKILE UKUTHOLA ISOFTWARE. »
Kubo bonke labo abagcwalisa imilomo yabo ukuthi iMozilla kufanele ibone kuphela lokho "okutholwayo" ngobuchwepheshe futhi njengabasebenzisi hhayi ngokubambisana njengomphakathi ohlonipha amalungelo abantu.
Kuleso sixhumanisi sesibili sisho nalokhu:
Abanye baseMozilla bangakhomba ngemisebenzi noma izinhlangano ezingasekeli ukufakwa okufanayo namazinga okwehluka okufana neMozilla. Uma kunjalo:
(a) ukusekelwa kwemikhuba ekhiphela ngaphandle akumele kwenziwe emisebenzini yeMozilla.
(b) ukusekelwa kwemikhuba yokukhiphela ngaphandle kwemisebenzi engeyona eyeMozilla akufanele kuvezwe ezikhaleni zeMozilla.
(c) uma kuhlangatshezwana (a) no (b), abanye abantu baseMozilla kufanele bakuthathe lokhu njengodaba oluyimfihlo, hhayi udaba lweMozilla.
Icala lomnikelo kaBrendan lingakhonjwa njengomsebenzi ongasekeli amazinga afanayo wokufakwa nokwehluka kweMozilla. Kodwa-ke, uBrendan uthobele imibandela (a) no (b), ngakho-ke ngokwesigaba (c) Ukunikela kukaBrendan bekungeyona indaba yeMozilla kepha bekuyindaba yangasese.
Le mibhikisho yingoba IMOZILLA BOARD OF DIRECTORS yamkhetha njenge-CEO, into eyiMozillian ngokuphelele (ukuqhubeka nokusebenzisa amatemu ombhalo weXD).
Ngakho-ke umnikelo akuyona into yaseMozilla, kepha ukuqamba igama kuyinto.
Ukungakhulumi ngomthelela esithombeni somphakathi senkampani, ngoba kuningi osekuvele kushiwo.
@diazepan iphuzu lakho liqondile. Akekho ongagxambukela ezimpilweni nasezikhundleni zabantu nezangasese zabantu, okwenziwe nguBrendan wakwenza kudala futhi ngokomuntu siqu.
Manje, ake ucabange ukuthi amacala amaningi alokhu angenzeka emhlabeni we-SL, ukuthatha njengesibonelo ukungqubuzana phakathi kwabalandeli bakaStallman nalabo bakaLinus, manumzane, lokho kungaba yisiphithiphithi emphakathini, futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi kunezingxabano, lapho amaphuzu okubukwa okungafani kakhulu, futhi lokho kubonakala ngaso sonke isikhathi, kwanele ukufunda uhlu lwe-kernel noma enye i-distro ukubona ukuthi sonke isikhathi kunokungqubuzana nokungqubuzana, kepha lokhu kuxazululwa njalo ngendlela ephucuzekile .
Manje ufuna umehluko wamanje nowangempela? Funda uhlu lwe-debian-devel kanye nezihloko ezihlobene ne-systemd futhi uzokwazi ukuthi ngikhuluma ngani, okungenani okwamanje angimlalelanga owokuqala ocabanga ukufaka udlame olwa ne-Debian ngesinqumo esenziwe, lokho bekungaba ukucwebezela ikhekhe kulokhu Uma kwenzeka, bonke baphonsa intukuthelo njengalokho abakwenzile eMozilla.
Ngikhohliwe ukufaka kumlayezo owedlule:
Uyaxolisa ngomphumela wezenzo zakhe, hhayi bona.
"Ngiyaxolisa ngokubangela lobo buhlungu."
-Ngikukhahlela emabhola ngokuthi ungowokufika, ngiyaxolisa ngobuhlungu engikudalela bona.
Kuhle kanjani ukuthatha into ekhishwe bese uyisonta ize ifike ezingeni lokuthi ikubeka ngqo okushoyo, yingakho ngibeka ukuhunyushwa okuphelele kwaleyo ngxenye lapha:
Interviewer: Yimuphi umyalezo ofuna ukuwuthumela kulabo abafuna ukuthi usule esikhundleni noma ukhumbule ngenxa yokuphikisana kwakho nomshado wezitabane?
U-Eich: Izinto ezimbili. Enye yazo - ngaphandle kokungena ezinkolelweni zami, engizihlukanisa nomsebenzi wami eMozilla - lapho abantu bezwa ngalo mnikelo, bezwa ubuhlungu. Ngabona lokho emehlweni abangane bami, [abangani] abangama-LGBT [abathandana nobulili obufanayo, abesilisa abathandana nabesilisa nabesifazane, noma abesilisa nabesifazane]. Ngakubona lokho ngo-2012. Ngiyaxolisa ukuthi ngabangela lobo buhlungu.
Enye into ukucabanga umhlaba ongenayo iFirefox. IMozilla isengcupheni lapha. Asazi ukuthi likhulu kangakanani. Uma iMozilla ingeke iqhubeke nokusebenza ngokuya ngemigomo yayo ebandakanya wonke umuntu, lapho ungasebenzela khona ukuthunywa, noma ngabe unayiphi imvelaphi noma izinkolelo, ngicabanga ukuthi kungenzeka sihluleke. Izwe elingenayo iFirefox, ngaphandle kweFirefox OS, futhi ngaphandle kwendlela yethu yokubeka abasebenzisi enkabeni yezinsizakalo zamafu, kunokuba abasebenzisi bakhohliswe izingadi ezibiyelwe - ngicabanga ukuthi kungaba umhlaba omnyama kakhulu. Ngingakukhuthaza ukuthi ucabange ngakho, noma ngabe kunzima ukukuqonda noma ukuhlangana nami ngenhloso kaMozilla futhi usebenzela injongo eyodwa.
Uhluke kangakanani umyalezo, awucabangi?
Uma ngifaka okukhishwe kuphela kungenxa yokuthi ubeke umthombo, ubukwazi ukufinyelela umbhalo ogcwele, asikho isizathu sokunamathisela ngokugcwele kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ingabe kufakwe osonhlamvukazi kakade? Uxolisa ngemiphumela hhayi ngezenzo zakhe.
Wonke umbhalo owucaphune, awukwazi ukuwusebenzisa njengokuxolisa ngoba kungaba ngamanga ohlobo lwe-argumentum ad misericordiam.
Imizwa yanxenxa, ukudabukela ukuthi ingxabano inikezwe.
Uyakwenza futhi, unikeza ukubaluleka kwesitatimende esikuthanda kuphela, wenza okufanayo njengawe:
"NGAPHANDLE KOKUNGENA IZINKOLELO ZAMI ZOMUNTU, ENGIHLUKANISE NOMSEBENZI WAMI EMOZILLA"
U-Ergo, enye into ukuthi ube nombono womuntu siqu nowangasese, futhi enye into ukuthatha lowo mbono noma isikhundla uye endaweni lapho kungathinta abanye, futhi lokho kuyinto evumelekile kunoma ngubani, noma ngabe yini enye.
LOL, sengivele ngachaza ukuthi unawo wonke umbhalo, akunakwenzeka ukuthi ngithathe okuthile nje.
Ngalesi sikhathi angicaphuni lutho, ngakho-ke awuphumi nento efanayo.
Kepha lapho, u-Eich, uyaxolisa ngomphumela wezenzo zakhe, hhayi ngezenzo uqobo.
Uma ungawuqondi umehluko walokho, angikwazi ukwenza okuningi.
Izishoshovu zentando yeningi ziqinisekile ngokuphelele (kusukela ngaphambi kwe-NSA) ukuthi iGoogle iyinkampani futhi ngenxa yalokho, ingathengisa umphefumulo wayo kusathane uma ifuna. Akukho lutho olusha kulokho, abanakho ukuzikhohlisa.
Manje, "izishoshovu zentando yeningi" eziningi njengoba uziqamba zibumba amathuluzi amasha we-IT noma zengeza lezo esezikhona ukuze kusetshenziswe izinto eziphephile ukusetshenziswa kwamakhompyutha. Ngaphezu kwalokho, basabalalisa okunye okuvele kukhona bese bebeka isibhakabhaka ezingxoxweni zonke zasendaweni maqondana nobumfihlo be-intanethi.
AbakwaGoogle bangabeka i-CEO abayifunayo futhi bayohlala benomcabango ofanayo maqondana nokuhlola i-intanethi. Kumele basebenzisane nohulumeni futhi bayizinja zakhe. Noma ngubani okholelwa ngenye indlela, kufanele anake kakhudlwana isenzo ngasinye sezinkampani endaweni yangakubo futhi abone ukuthi kufanele bakhokhe (ngokoqobo) uMbuso obavikelayo, ngakho-ke, bathobele imithetho nezinqubomgomo zabo zomphakathi izinhloli.
I-athikili egcwele amanga, eqala ngesihloko.
Yeka imikhuba yabantu yokuphambanisa ukuvikelwa kwamalungelo abantu, umthetho nezepolitiki kube sengathi yinto efanayo.
"Lawa amaqiniso, okunye ukuqagela okumsulwa: ..."
Impela lawo yiqiniso, kepha ukucabanga ukuthi othile uphansi ngenxa yobungqingili bakhe futhi enze ngokufanele, ukukhokhela umthetho ukuze ubaphuce amalungelo abo ayisisekelo kuyincazelo enhle kakhulu yokuzondwa kwabantu bobulili obufanayo.
Noma manje bazothi uma ngikholelwa ukuthi abantu abanebala elimhlophe baphansi, kufanele babe yizigqila, ngixhasa iKu Klux Klan, angiyena umuntu ocwasa ngokwebala, "kuyinkolelo yami nombono wami kuphela."
Ukuthi inqubo yokukhuthaza izinhlelo ngandlela thile ayibuswa ngentando yeningi akusho ukuthi ezinye zalezi zinhlelo azikho emthethweni, azivumelani noMthethosisekelo futhi ziyacasula abantu namalungelo abo.
Uma ngikhokha ukukhuthaza ukuguqulwa kumthethosisekelo okuyalela ukubulawa kwanoma yimuphi umuntu wangaphandle ongena ezweni likazwelonke, noma ngabe uza ngokusemthethweni eholidini, azotshala imali, njll.
Ngakho-ke ngiyi-xenophobe, "akukhona nje izinkolelo nemibono yami", i-xenophobe eqondiswa izindlela zentando yeningi, kodwa i-xenophobe ngemuva kwakho konke.
«Kunomqondo osemthethweni wokuthi“ inyunyana yomphakathi ”enikeza labo abanesivumelwano amalungelo afanayo (ikakhulukazi ezomnotho) njengesibalo somshado» Hhayi kuzo zonke izimo banamalungelo afanayo, futhi ezimweni abasebenza kuzo, banazo Kungaba yini isizathu sokuthi kungani kungewona "umshado"? Njengoba ngalokho kungenzeka kuphela ukunikeza i-nuance engemihle ebudlelwaneni babantu bobulili obufanayo.
Ngale ndlela, inyunyana yomphakathi iyatholakala nakwabobulili obuhlukile, ngakho-ke futhi kungaba yini impikiswano yokuthi umshado ungatholakali kubantu bobungqingili?
Iyiphi indlela yokusonteka lolu daba, kulokhu obekufunwa ukuthi inhlangano ene-ajenda yomphakathi ebandakanya wonke umuntu ayinaye umuntu onemvelaphi ephikisana naleyo ekhanda.
Ngenkathi engeyona i-CEO kwakungekho nkinga, ngoba "izinkolelo nemibono" yakhe yayingadluli ngaphezu kobuchwepheshe, kodwa esikhundleni sokuphatha kungalimaza isithombe senhlangano.
«... ukuntuleka kokusebenzisa ingqondo kuvimbela ukuhlukanisa phakathi kwemibono nezenzo ezisemthethweni zabantu kanye namandla abo okunikela ngolwazi nobuchwepheshe obukhululekile nobukhululekile emphakathini nokuthi egameni lokulingana, ukufakwa kanye nentando yeningi ubushiqela labo abamemeza kakhulu ngobukhulu obuthule. "
Lowo owasula esikhundleni wakhetha ukungaqhubeki nokunikela kwakungu-Eich. Futhi into oyikhohlwayo ukuthi akayena umesiya wekhompyutha, ubengeke eze ukuzosisindisa yedwa, kunabantu abaningi abakwaziyo ukuqhubeka naleyo mpi kusukela ezingeni lobuchwepheshe nelokuphatha.
Manje kuvela ukuthi iMozilla yawa nje ngoba ingasenayo i-CEO.
Indlela enhle yokuvalelisa ngokulinganisa abantu nezinhloso zokulingana kwezenhlalo namaphekula, i-levelazo.
Vumelana ngokuqinile kukho konke.
Nginesiqiniseko sokuthi ngabe u-Eich ubengabokucwaswa kwabokufika noma ebandlulula noma into enjalo, akekho noyedwa lapha ongamvikela.
Lapho ngifunda igama elithi "amanga" kunoma iyiphi inkundla ye-Intanethi, izinwele zami zifana nezipikisi. Ngoba cishe njalo kuyincazelo engalungile bese kuthi ukuqhathanisa kuvame ukweqisa! Uyabhala:
"Ngempela lawo yiqiniso, kodwa ukucabanga ukuthi umuntu uphansi ngenxa yobungqingili bakhe futhi enze ngokufanele, ukukhokhela umthetho ukuze ubaphuce amalungelo abo ayisisekelo kuyincazelo enhle kakhulu yokuzondwa kwabantu bobulili obufanayo."
Ukuze ubaleke emangeni, ezinye izinto kufanele zicaciswe:
kunabantu abacabanga futhi baveze ukuthi abahambisani nomshado wezitabane; Akusho ukuthi laba bantu bakholelwa ukuthi ongqingili "bangaphansi." Ngiyazi abambalwa abakholelwa nje ukuthi "bahlukile." Bese kuba khona abakholwa uNkulunkulu munye abangakholelwa nje kuphela ukuthi bangaphansi kodwa futhi bakholelwa ukuthi kufanele bajeze ngokuba ngobungqingili. Futhi empeleni emazweni amaningi kunemithetho ebajezisa. Futhi ngaphakathi kwabakholelwa kuNkulunkulu munye kunamaKhatholika angabazenzisi kakhulu futhi kwanele kubo ukuthi ongqingili "abenzi" futhi bacashe; njengoba benza eSpain kuwo wonke umbuso wobushiqela.
b- Ake sizimisele. Umshado akulona ilungelo eliyisisekelo. Ngaphandle kokuthi uphendukise amalungelo ambalwa ayisisekelo wokufaka umshado.
c- Kuthiwani uma kungamalungelo ayisisekelo: inkululeko yemibono, inkululeko yezenkolo, inkululeko yezocansi nenkululeko yokukhuluma.
d- Ngokuphikisana nalokho abantu abaningi abakucabangayo; Lawa malungelo awawona akhethekile noma awahambisani !! Umuntu angaphiko kwesokudla, abe ne-Ultra-Katolika, futhi abe yisitabane noma aqonde. Ngokubona kwami ​​kuzo zonke izimo nokuhlanganiswa, usenelungelo lokuziveza ngokukhululeka ngaphandle kokuphindisela ngomqondo noma ngombono oveziwe.
Ilungelo eliyisisekelo lokukhuluma ngokukhululeka (ngomlomo, okubhaliwe, okubukwayo ...) akumele livinjelwe uMbuso noma ezinye izinhlangano zokuphatha noma zebhizinisi futhi i-EC iyakwenqabela ukucwaswa kwangaphambilini.
Ngiyakuqonda ukuthi kuleli cala, iqembu okwaphela iminyaka (futhi ngazalwa eminyakeni yama-50s) likhononda ngokubandlululwa yimithetho (kwakungakaze kube khona eSpain noma yimuphi umthetho ojezisa ubungqingili, kodwa ngesikhathi sobushiqela eminye imithetho yayisetshenziswa kubo ukuze bajezise ongqingili abafuna ukujezisa. Labo ababengaphansi kombuso abajeziswanga, yize babephoqeleka ukuthi bangazenzi izimpilo zabo eziyimfihlo emphakathini. Ukufihla ukuthambekela kwabo kwezocansi); Ngemuva kuka-1978 baqhubeka nokukhononda ngoba babezizwa becwaswa (kwakuyiqiniso futhi ngangihlale ngibasekela) ngoba babengeke bakwenze kube nokwenzeka (ukwenza kube semthethweni) ukuhlala kwabo (futhi, futhi, abesilisa nabesifazane abaningi basekela lezi zimfuno ngoba sasikholelwa ekulinganeni). Manje kunomthetho obalinganisa kukho konke nabangewona ongqingili. Ngiyajabula!! Nginabangani abangongqingili abahlala ndawonye isikhathi esingaphezu kwama-30 (kwabesifazane abathandana nabobulili obufanayo bekuhlala kulula ukuhlala ndawonye) iminyaka futhi okokuqala bekwazile ukuphuma emgwaqweni benze ubudlelwane babo obala.
Kungizwisa ubuhlungu ukubona ukuthi amanye amaqembu ongqingili manje njengoba ukuhlelwa okucacile sekutholakele; yenza ngendlela efanayo nakulabo abakucwasa ngaphambilini !! Kungizwisa ubuhlungu, ngaphezu kwakho konke, ukuthi bazama ukuphuca labo abaqhubeka nokuchasana nemishado yobungqingili nemishado yezitabane ilungelo lokuveza imicabango yabo. Ukuziveza !!
Manje kuvela ukuthi amanye amaqembu ongqingili enza njengama-ultra-Catholic! bacasulwa yimibono yabanye abantu !! Uma isikhulu esiphezulu seMozilla sithi "amaKhatholika ayiqembu labathumbi abakholelwa kwabafokazi abangaphandle komhlaba nasezinganekwaneni nasezinganekwaneni ezikhuluma ngepharadesi emva kokufa nokuvuka kwabafileyo"; Kwakungafanele ngishiye phansi ngenxa yayo (yize iMozilla Foundation ifaka wonke umuntu futhi inamaKhatholika amaningi ezinhlwini zayo); uma, ngokuqinisekile ukuthi ama-ultra-Catholic amaningi angazizwa ecasulwe kakhulu yilowo mbono futhi ngabe amemeze ezulwini.
Bengihlale ngisho, maqondana nabakholelwa kuNkulunkulu munye futhi manje ngiyakugcina futhi maqondana namaqembu ongqingili; ukuthi "ilungelo eliyisisekelo lokuzizwa licasulwa yimibono yabanye alikho!" Ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sihloniphe inkululeko yokukhuluma yabanye, futhi sivikele ilungelo lokusebenzisa inkululeko yokukhuluma. Ukube abanye bebengayilweli ngaphambi koMthethosisekelo ka-78 kungenzeka ukuthi izitabane zisenabo ubunikazi bazo ngokobulili.
Ngiyakuqonda ukuthi ongqingili abaningi bazizwa kabi lapho bezwa imibono ephikisana nokuziphatha kwabo ngokobulili. Kepha ... kufanele bafunde ukuhlonipha ilungelo labanye lokuthi "baveze" abakuthandayo! Uma nje beveza imibono yabo ngokukhululeka futhi kungekho "senzo esisodwa" esivimbela noma esivimbela ukusetshenziswa kwamalungelo abo, ongqingili kumele balihloniphe ilungelo lokukuveza kulabo abalivezayo. Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi umkhawulo ukhona impela.
Noma manje bazothi uma ngikholelwa ukuthi abantu abanebala elimhlophe baphansi, kufanele babe yizigqila, ngixhasa iKu Klux Klan. Angiyena umuntu ocwasa ngokwebala, "inkolelo yami nombono wami kuphela."
Futhi uphuma esandleni uma uqhathanisa !! kuleso simo ubeka njengesibonelo; Noma ngubani oxhasa inhlangano yobugebengu futhi engekho emthethweni njengeKu Klus Klan ezinikele ekuhlukumezeni nasekubulaweni kwabantu abamnyama wenza okungaphezu nje kokuthi "ukhuluma obala." Uxhasa inhlangano yezigebengu !! futhi lokho kuyicala e-United States nakunoma iliphi elinye izwe lentando yeningi eNtshonalanga.
Futhi-ke akufani nalokhu okunye okubhala ngezansi:
"Ukuthi inqubo yokugqugquzela izinhlelo zentando yeningi akusho ukuthi ezinye zalezo zinhlelo azikho emthethweni, azivumelani noMthethosisekelo futhi zihlasela abantu namalungelo abo."
Kuya ngohlobo lwezinhlelo esikhuluma ngazo, akunjalo? ESpain kunamaqembu abathumbi abathathelwa phezulu abangamaKatolika akhuthaza, axhase futhi abambe iqhaza ezinhlelweni eziphikisana nomthetho okhona wokukhipha isisu. Futhi inqobo nje uma kumayelana nemiboniso enokuthula (noma ngisho nemibhikisho ephikisayo); akukho lutho kulezi zinhlelo ezingekho emthethweni noma ezingahambisani noMthethosisekelo. Kuyizibonakaliso lapho kuvezwa khona ukwaliwa kweqembu labantu ukuya emthethweni abangavumelani nawo. Ngoba abantu abanjalo bakholelwa ngokuqinile ukuthi "banelungelo lokuphoqelela izimiso zabo zokuziphatha kanye nekhathekizimu labo emphakathini wonke" !!
Yini engalungile? Ngicabanga kanjalo. Kubi kakhulu. Ukuthi abanalo ilungelo lokukhombisa? Ngikholwa ukuthi banelungelo lokuveza imibono yabo, noma ngabe kuphambene nomthetho osusetshenziswe iminyaka. Yini ecasula abanye abantu ukuthi sikholelwa ngenye indlela? Angiphatheki kabi, ngicabanga ukuthi bafana namasimbi ezinkomo kodwa ngivikela ilungelo labo lokuveza abakuthandayo. Njengoba ngike ngabhala phambilini, ilungelo lokucasulwa alikho ku-EC noma ku-UDHR. Noma ngubani angacasulwa lapho ezwa kanjalo. Uma ucabanga ukuthi unethuba, okufanele ukwenze ukuya enkantolo uyobika labo abakucasulayo ...
Futhi maqondana nalokho okushoyo ngeNtando yeningi ... Angivumelani ngokujulile nawe ngalowo mbono. Asikwazi (akufanele) ukwamukela okukuDemokhrasi okuhle kithi, lapho kusilungele futhi senqabe lokho esingakuthandi. Intando yeningi iyikho. Bathi alukho uhlobo olungcono lukahulumeni. Futhi indlela engcono yokulwela iDemokhrasi ukulwela ilungelo lokukhuluma ngokukhululekile. Kuzo zonke !! ngisho nakulabo esicabanga ukuthi abalungile.
Futhi ngithemba ukuthi awuyithathi le misho yokugcina njengokuqondile kwezepolitiki Ngiphile iminyaka lapho ilungelo lokukhuluma ngokukhululekile lalingekho eSpain, futhi kwakukhona ukucwaninga kwangaphambili nokujeziswa okwalandela. Angifuni noma ngubani ukuthi adlule kulokho.
@Xurxo: «Kungizwisa ubuhlungu ukubona ukuthi amanye amaqembu ongqingili manje njengoba sekuvele ukutholakala kokujwayelekile sekufeziwe; yenza ngendlela efanayo nakulabo abakucwasa ngaphambilini !! Kungizwisa ubuhlungu, ngaphezu kwakho konke, ukuthi bazama ukuphuca labo abaqhubeka nokuchasana nemishado yobungqingili nemishado yezitabane ilungelo lokuveza imicabango yabo. Ukuziveza !! »
Ngiyifundile yonke impendulo yakho, kepha lokhu kukhishwa akunakulingana futhi akunakuqiniseka ngokwengeziwe @Xurxo, yilokho kanye okwenzekile ngalesi simo.
Ngingathanda ukwazi ukuthi yini engalungile ngokuqhathanisa okwedlulele? ekupheleni kosuku basebenzela inhloso efanayo, futhi nosizo olwedlulele ukwenza iphuzu okukhulunywa ngalo libonakale kakhulu.
a- Ngokusobala ngithe «... bese ngisebenza ngokufanele», empeleni kukho konke ukuphawula kwami ​​kufanele ngigcizelele ukuthi imibono yabantu akuyona inkinga, inqobo nje uma ingaweli umngcele wesenzo, ngoba izenzo yizo ezichazayo; Akukhathalekile ukuthi angibathathi ongqingili njengabaphansi, uma ngenza ngokungahambisani ngqo namalungelo abo, nginesimo SENGQONDO sobungqingili futhi lokho kuyangichaza.
b- AMANGA, cabanga ngokufunda ngesimemezelo samalungelo abantu jikelele, ikakhulukazi i-athikili 16, ekhuluma ngokuthi umshado uyilungelo eliyisisekelo kanjani.
c- AMANGA (ngokwengxenye) Amalungelo ayisisekelo yiwo wonke lawo esinalo ngeqiniso lokuthi singabantu, futhi acatshangelwe ekumenyezelweni kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele.
d- Yiqiniso, kepha ayisebenzi.
e- Futhi ngubani okhuluma ngelungelo lokukhuluma ngokukhululeka? Lapha kuphikiswana ngokuthi umuntu akhokhe (ngixhasa ngemali, kulabo ababucayi) ukuze abantu abangazi nokwazi bangashadi ngenxa yezintandokazi zabo zocansi. Futhi-ke akekho owayebuza ukuthi aboshwe noma yini efana naleyo.
Ngeke ngiye kude kakhulu nesihloko ngakho konke lokho, kepha uma kufanele kucaciswe ukuthi inkululeko yokukhuluma ayinamkhawulo, iphelela lapho ilungelo labanye lokunganyundelwa liqala khona (elingahlobene nhlobo nokuzizwa ukhubekile », Okuthi ngendlela, angishongo nganoma yisiphi isikhathi).
Ngikunikeza esinye isibonelo esinehaba, esinye salabo engisithanda kakhulu:
-Uma umuntu efika ezongisola ebusweni bami ngokumntshontshela, angikhubeki, nginonembeza omsulwa, ngiyamziba. (Mhlawumbe omunye umuntu akakubekezeleli futhi ngingaqonda)
-Ngosuku olulandelayo NGIYAZIKHUMBULA ngokuntshontsha bese kufika amaphoyisa ezongithatha azofakaza, ngisazi ukuthi angintshontshi, ANGANGIKHUMBUZI, kepha ngikhokhiswa imali yokulimala kokuziphatha nanoma yimuphi umphumela. Ngoba usevele weqe umgoqo walokho inkululeko yakhe yokukhuluma emvumela khona.
Ingabe icace ngokwanele? Njengokungathi ukuqonda ukuthi le nkinga akuyona into ayicabangayo noma ayishoyo, kepha u-Eich, uzame ukusebenzisa imithetho ukuvimbela ukushada kwabantu abathile.
«Futhi uphuma esandleni uma uqhathanisa !!»
FUTHI? Ihaba liyinto evumayo yokuphikisana, emqondweni kunokuthile okubizwa ngokuthi ukwehliselwa kokungenangqondo, okuyihaba impela okukhombisa ukungabambeki kwengxabano.
Okunye futhi ukuthi ucabanga ukuthi ukucwasana ngokobuhlanga akufani nokucwaswa kwabokufika, ukuzonda abesilisa nabesifazane noma olunye uhlobo lobandlululo olwephula amalungelo abantu.
"Kuya ngezinhlelo ezinjani esikhuluma ngazo, angithi?"
Yebo kunjalo! yingakho ngibeka: «... ukuthi EZINYE zalezo zinhlelo ...»
Imininingwane ngukuthi isinyathelo 8 kwathiwa INKANTOLO EPHAKAMILE SASEMTHETHWENI ASIKHO MTHETHWENI.
«NgoJuni 26, 2013, iNkantolo Ephakeme yase-United States yakhipha isinqumo sayo mayelana nokudluliswa kwecala ecaleni elithi Hollingsworth v. UPerry, uthathe isinqumo sokuthi abasekeli bezinhlelo ezinjengeSiphakamiso 8 BABANGENAKUTHI BAMA NGOKWEZOMTHETHO ngelungelo labo lokuvikela umthetho ophumela enkantolo yenhlangano, »
"Futhi maqondana nalokho okushoyo ngeDemokhrasi ... Angivumelani kakhulu nawe kulowo mbono ..."
Angazi ukuthi usho ukuthini.Ngikubhale nini okuthile ngentando yeningi? Ngiphinde ngafunda umbhalo wami futhi angitholanga ongangibhekisa kukho.
Singahle singavumelani, sibe nemibono eyehlukile futhi engalungile, kepha kuyintokozo ukuphikisana ngenhlonipho enjalo.
Ngiyabona ukuthi ukhuluma kakhulu nge-CE (Umthethosisekelo waseSpain, ngicabanga) nezimo ezithile zaseSpain, njengoba leli cala lenziwa e-USA, nabantu abavela kulo lonke leli zwe lomhlaba baphikisana ngalo, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukunamathela kumbono womhlaba wonke , amelwe kahle ngamalungelo abantu akhuthazwa yi-UN.
Ngiyavuma ukuthi angiyena, futhi angiseduze nokuba ngumbhali okahle, futhi kwesinye isikhathi ukubhala kwami ​​nokuthi i-intanethi ingangikhapheli kanjani, okwenza kubonakale sengathi ngiphatheke kabi noma ngithatha okuthile uqobo, noma okungenani bangitshela kanjalo okuningi.
Uma ngikunikeza umbono walokho, ukuxolisa, akuyona inhloso yami.
Ihlombe, singavala imibono xD
Kuhle ukuphawula kwakho Xurxo, ungisindisile ngiphendula Abasebenzi, ngicabanga ukuthi ngizobuza umbuzo owodwa kuphela: Ubani ongaba yijaji eliphakeme elinquma okulungile noma cha? Akukhona yini lokho ukuthi imithetho yayenzelwe?
Ngokusobala abantu abaningi bayathanda ukukhuluma ngentando yeningi, kepha yilabo kuphela abake baphila noma abaphila ngaphansi kobushiqela abangaqonda kahle ingqikithi yayo.
Leyo yimibuzo emibili.
"Ubani ongaba yijaji eliphakeme elinquma okulungile noma cha?"
Akudingekile ukuthi ube nejaji eliphakeme, unesiqondisi, i-UDHR, esuselwe kuso, abahluleli bezimo namazinga ahlukahlukene banganquma ngokuya ngezici zecala ngalinye.
"Akukhona yini ukuthi leyo mithetho yadalelwa lokho?"
Vele, futhi uma unomthetho othi sonke sinenkululeko yokushada noma ngubani esimfunayo, kungani umuntu ecabanga ukuthi umuntu unelungelo lokukuvimbela (hhayi nje ukucabanga nokusho, kepha ukwenza)?
Ngenhlonipho efanele, abantu be-LGBT abakweleti lutho kubantu abathandana nabobulili obuhlukile, abakhululekile noma abangaqhubeki; akekho umuntu oye wasindisa izimpilo zethu. Wonke amalungelo esiwajabulelayo yingoba ngomzamo omkhulu, umzabalazo nokuzidela, iqembu le-LGBT linqobile.
Mayelana nenhlonipho yenkululeko yokukhuluma, ama-LGBTs yiwona ahlonipha kakhulu inkululeko yokukhuluma, yithi esibekezelela kakhulu ... ngoba kuvela ekuzalweni ... zingaki izinhlamba, ukubandlulula, ukuhlaselwa i-LGBT ehlupheka noma ekucabangayo kukho konke impilo yakhe? ABANINGI. Sijwayele ukubekezelela, ukubekezelela zonke izinhlobo zezisho, noma ngabe ziyacasula, ziyacasula, ziyedelela. Sibheke ukuthi kunabantu abaningi abazonda ongqingili.
Kepha izinto ziyashintsha ngenhlanhla zivuna abantu be-LGBT. Yize kukuningi okusamele kwenziwe. Esikhathini esisekude kakhulu, ama-LGBTs ayengabekezelela kuphela, abekezelele zonke izinhlobo zenkululeko yokukhathazeka, edelelekile, ehlambalazayo nehlaselayo yokukhuluma kuma-LGBTs ... MANJE SINGABALWA NABO, SILWE NABO, SIQEDE BONA.
Udidisa INKULULEKO YOKUKHULUMA NGOKUPHATHISWA KWE-VERBAL / PSYCHOLOGICAL, okuyilokho ama-LGBTs ahlupheke ngakho iminyaka eminingi, futhi akwamukelekile kunoma yimuphi umphakathi wanamuhla nophucukile.
Futhi ekugcineni ngiyakhumbula futhi ukuthi owayengumqondisi weFirefox ushiye phansi i-HOMOPHOBIC ACTIONS, hhayi ngemibono yakhe. Futhi-ke kufanele kube njalo: umugqa wenhlonipho yenkululeko elandelayo akufanele neze weqiwe, futhi le ndaba yephule lo mthetho oyisisekelo wokukholelwa emphakathini wanamuhla futhi ophucukile: WAKHOKHELA UKUQEDA AMALUNGELO ALINGANAYO EQEMBU LOMPHAKATHI, nokuthi ayamukeleki kalula.
UGeraldo rivera kusho
Yenza uthando hhayi impi.
Phendula uGeraldo Rivera
Ngisho no-hitler ubengeke enze kahle kangaka, indawo yokwamukela izitabane izohamba kude kangakanani? vimbela, xosha, isitayela esimsulwa esiphikise kakhulu ...
Ukuqothulwa kohlanga namadevu bekuthatha isikhathi eside ukuthi kuphume ...
Vumelana ngokuphelele nendatshana
Njengoba ngishilo kokunye okuthunyelwe lapha, ukuqokwa bekungekho ngesikhathi esifanele noma ngokuzikhethela. Kunabantu ababemkhetha ngaphakathi emphakathini ukuba abe yi-CEO. Uma ungamele umphakathi njengoba ngifundile kumazwana amaningi kuwebhu: kungani ontanga yakho bakukhethe? Mhlawumbe kungaleso sizathu esifanayo uthola umsebenzi: amakhono obuchwepheshe nobuchwepheshe, ngaphezu kwanoma yimiphi imibono yezepolitiki noma yezenkolo. Abakhetheli umlingani noma umngani, bakhethe kuphela isikhundla, esijikelezayo, futhi esingasakazwa ngabantu abafanayo abakukhethile. Labo abasulile ngokungavumelani ngiyethemba abakaze bavote phambilini, kungaba ukusula ngendololwane. Ngubani la maqembu engcindezi azoduba uma ezwa ukuthi i-Utah ingenye yezinjini zesayensi yamakhompiyutha futhi kunenkampani ye-SL eyenziwe ngamaMormon! Sebenzisa umkhiqizo akusho ukuxhasa noma cha imibono yabadali.
«Masenze into icace bha: ukuthi umuntu akawuvumeli umshado wezitabane akusho ukuthi bayabandlulula noma bazonde labo abathanda lokho kwezocansi, empeleni, ngazi abantu“ abathandana nobungqingili ”ngokweqile abangawuvumeli umshado wezitabane, ngoba bona igama elithi umshado linemiphumela yezenkolo elenza lingahambisani nenkolo abathi, ngiyayiqonda futhi ingaphakathi kwamalungelo abo. Kungakho kwamanye amazwe kunesibalo esisemthethweni se- “civil union” esinikeza abashadikazi amalungelo afanayo (ikakhulukazi ezomnotho) njengezibalo zomshado, okuthi ekugcineni, sikhulume iqiniso, kube yilokho konke lokhu. »
Imiphumela yezenkolo? Ngakho-ke ngoba angikholelwa kuNkulunkulu noma eSontweni, angikwazi ukushada "njengabakhethiweyo" futhi ngibize umshado wami wenyunyana? Ayikho inkolo enelungelo lokuthatha igama elingaqanjwanga.
Umlayezo wakho uyadida noma awulungile, ubeka "ukuqonda okuvamile" noma / futhi "ukunemba kwezepolitiki" njengezinketho kuphela futhi uthatha uhlangothi, (okuyinto enhle).
Kepha… kungaba: Ubuzenzisi = 0 Ethics = 1
Ngokwami, ngicabanga ukuthi kuphrojekthi yenkululeko nokulingana, (kubonakala kusobala ukuthi le ndoda ayivumelani nalowo mbono, futhi okubi kakhulu, ibambisene nayo), iphrofayili yayo ayihambelani, futhi lokho kungumqondo ovamile futhi okulungile kwezepolitiki ngaphakathi kwalolo hlaka, (ngikhuluma ngeSisekelo, abahlanganyeli kanye nabasebenzisi bayo abaningi futhi bekungeke kube njalo ngabangane babo abavela kuTe Party), ngakho-ke, kulokhu bayimiqondo emibili ehambisana. Kubukeka kulungile kimi ukuthi akagcini ngokushiya isikhundla sokuba yi-CEO, kepha futhi ushiya iSisekelo, noma ngabe unekhono elingakanani, uzokwenzelwa ini. Kule ndaba "yesoftware yamahhala" isimo sokuziphatha noma sokuziphatha singaphezulu kwesici sobuchwepheshe, okungenani yilokho ebengilokhu ngikholelwa kukho.
Futhi ukwenza i-prosaic eyengeziwe: Ukuthi lokhu kucindezelwe kuzoncela amaqhude futhi kujabule, esikhundleni sokusebenzisa imali kubantu abagembayo !!
Lo mbhalo ukhombisa ukuthi umuntu ngokufaka isandla esenzweni sokulwa nomshado wezitabane kungenzeka angabi nobungqingili. Yini amathuba okuthi lokho kwenzeke? Ngicabanga ukuthi ngisondele kakhulu ku-zero.
Lapho umuntu enqaba umshado njengesikhungo, kungaba ngenxa yezizathu zomphakathi noma ezenkolo, yingakho uzowenqaba. Kuvamile kubantu abenqaba umshado njengesikhungo futhi bakholelwa ekulinganeni kwabantu abasebenzisa izindlela ezimbili zokucabanga (empeleni hhayi kuphela, kodwa iningi): noma bamukela ngokwengxenye ngoba bayabona ukuthi kuyisinyathelo noma kunjalo uvuna ukulingana phakathi kwabo bonke abantu noma uhlale eceleni.
Abanye abaqondi ukuthi ukucatshangelwa komuntu siqu kuhlobene nesoftware yamahhala, ngoba umsebenzi ubambisene futhi ujwayelekile emphakathini. Ngokuvamile (ngiyazi ukuthi lokhu kunjalo kwezinye izingxenye, kepha akuwona umsebenzi omningi kwisoftware yamahhala) kubalulekile kuwe ukuthi indawo enhle igcinwe emiphakathini, ngaphandle kokubandlululwa okuya ngocansi, ubuhlanga, ulimi, njll. (Olunye ubandlululo luyenzeka, ngendlela, kodwa hhayi impela kumuntu, njengokuthi wazi ukuthi ungasiza yini ukubhala phansi, ukuklama i-logo noma uhlelo).
Kubonakala kimi ukuthi abasunguli bakho konke lokhu abanalo ithoni engcono yokukubika futhi babe nesimo sengqondo sobuntwana, kepha yingakho-ke bezokwenza isithunzi esiphansi ngalo mnikelo okhombisa ngokusobala ukuzondwa kwabantu bobulili obufanayo. Izinto ezinjengalezo zinganakwa kusoftware ephathelene nezinkampani lapho izinkampani kanye nabaphathi bazo baphatha khona. Noma iMozilla ifuna ukubukeka njengaleyo mhlaba, isenomphakathi wayo kanye nomphakathi wesoftware wamahhala ongeke uzibe lolu hlobo lwesimo.
Ngaso sonke isikhathi lapho othile ebeka imibono ebandlulula kubantu bobungqingili, basho into enjengokuthi "Nginabangane abayizitabane abacabanga njengami ...", "Nginabantu engibaziyo abayizitabane abeseka engikushoyo ...". Akuhluleki.
Uma u-Eich noma omunye umuntu ebeseke isinyathelo eCalifornia (ngokuzimela, NGOKUVAMILE, noma ingabe u-Eich uqokwe njengomkhulumeli womphakathi? Yebo, noma imuphi umbono womuntu siqu ka-Eich noma omunye umuntu uhlala enguMUNTU njalo) ukuthi izifundi zinikezwa ama-Afrika aseMelika noma amaLatinos, ngokumelene nokulingana phakathi kwabesilisa nabesifazane, noma ngenxa yokubandlululwa kwamaJuda, noma amaSulumane onke aya eGuantánamo ... bekhethelwe okuthile (ngaphandle kwaKaffirs) no-b) Babengeke bafune ukumiswa kwakhe, uma bekhethwa?
Kwamanye amazwe abesifazane abavunyelwe ukukhuluma nabesilisa abangewona amalungu omndeni wabo. Ngokwemvelo, noma ngubani ovikela lokhu usebenzisa inkululeko yakhe yokuveza imibono yakhe (kumalungelo abesifazane, ngakolunye uhlangothi, baqinise). Kwamanye amazwe, ukuba yisitabane kunqunyelwe ukufa. Kungumqondo womuntu siqu ukusho ukuthi ongqingili bahlukile (mhlawumbe baphansi?) Kwabanye futhi yingakho bengakwazi ukuba namalungelo afanayo nawabantu abathandana nabobulili obufanayo (ngokwesibonelo, ukusayina inkontileka, engeyona engaphansi komshado) . Kwamanye amazwe, ukuba ngowenye inkolo okungeyona esemthethweni kujeziswa ngumthetho. UNkulunkulu akavumeli (irony = OFF) ukulungisa lawo madoda angcwele, kepha ngabe umbhali wale ntambo angameseka u-Eich - noma omunye umuntu - ukube ubesekela umthethosivivinywa ukuze, ngokwesibonelo, amaKristu angamaLuthela kuphela ukuthenga impahla edolobheni elithile?
Inkululeko yokukhuluma (umqondo ongasetshenziswanga, okuthakazelisa ngokwanele, yilabo abavumela ukukhawulela inkululeko yabanye) ayihlanganisi nokuthi: «Abantu abaNsundu baphansi, ngizonikela ngemali ukuze ngibandlululwe ngumthetho, futhi uma ungigxeka ungumuntu p * t * n * zi antidemocrat ukuthi awuyihloniphi inkululeko yami yokukhuluma, lungu lendawo enkulu yokwamukela izivakashi emnyama ».
Kubukeka sengathi kunokubandlululwa okungamukeleki (ngabe umbhali weposi angakwamukela ukuthi u-Eich unikeze imali ngomkhankaso ovimbela abesifazane ukuthi basebenze ngaphandle kwemvume yendoda, bevula i-akhawunti yasebhange ngaphandle kwemvume yendoda ...?) Futhi kunalokho esikhundleni salokho yebo (ukuthi ongqingili abanamalungelo afanayo nawobungqingili).
Kunezinkinga eziyingxenye yemvumelwano evamile ephucukile, futhi phakathi kwazo kukhona ukulingana kwabo bonke abantu (ngaphandle kokwehlukanisa ubulili, ubuzwe, ubuzwe, njll.). Omunye umuntu angasho ukuthi, ngokwesibonelo, amaJuda angamahlanga aphansi. Kungumqondo (isilo, ngasendleleni). Uma uhlanjalazwa ngalokhu, ingabe inkululeko yakho yokukhuluma iyancishiswa? Cha, uvikela AMALUNGELO abanye (amaJuda akulesi sibonelo, kepha esikhundleni sama- "Jewish" ufake "gypsies", "black", "Latinos", "women", "people who liked the end of Lost" …).
Nginenkululeko yokukhuluma ukusho ukuthi umakhelwane wami uyisiphephelo futhi ngifaka uphawu efasiteleni elikumemezelayo. Umakhelwane wami ukhululekile ukungibika futhi athole ijaji elizongijezisa. Ingabe inkululeko yami yokukhuluma ibekelwe imingcele? Lo ngumbuzo wegceke lesikole futhi impendulo ithi, kafushane, CHA.
Ngabe umbhali walolu chungechunge angamxhasa u-Eich ukube ubesekele uhlelo lokuxhasa ongqingili abangakwazi ukuthola ilayisense lokushayela eCalifornia (njengoba kunjalo ngabesifazane kweminye imibuso yezombusazwe namuhla)? Noma ukungakwazi ukuvula i-akhawunti yokuhlola (njengoba kwenzeka nabesifazane eSpain ngesikhathi sobushiqela bukaFranco)?
Ngendlela, kubalulekile ukuthi, ngokusho kombhali, ukugxeka u-Eich kungumsebenzi we "LG lobby lobby". Kusho okuningi ngendlela yokucabanga kwalabo abasho lokho
yebo yebo kunjalo. Shiya ukukhishwa kwe-demagoguery.
Okungenani uphikisana nempendulo yakhe, futhi wenza kahle kahle. Unikeze isibonelo samacala ukuze iphuzu lokubuka liqondwe, angiboni ukukhishwa kwemininingwane.
Ngivumelana kakhulu nawe.
Ukuphikisana okuhle kakhulu, okubeka ihlazo labo bonke labo abavikele ngokungenasizathu umhlukumezi, owayeyi-CEO endala, futhi abahlasele izisulu zalolu dlame, i-LGBT, abahlukunyezwe ngokuya ngocansi.
Kuyadabukisa ukuthi le ngosi ikhethe ukuvikela abakwa-HOMOPHOBES, ukubalungisa, ukubavikela, ukwenza umsebenzi wommeli kasathane.
Futhi ukufihla isizathu sangempela sokugxeka kwabo i-LGBT, i-HOMOPHOBIA ekhabetheni, bakushintsha kube yimpisi egqoke isikhumba semvu, bayibize nenkululeko yokukhuluma. YEBO kuyindlela yokukhuluma, ukubandlulula, ukungafaneleki noma ukubukela phansi iqembu lomphakathi. Kepha singahlanya uma singanikeza inkululeko le ndlela yobudlova / ubudlova, emphakathini wanamuhla, wobuningi nobekezelelayo ... ukubekezelela ukuthula nokungabekezeli kwabahlukumezi / abanodlame. Abanye kufanele babone isesame street ukuze bafunde ukuthi kuyini ukubekezelelana nenkululeko. Akukona okokuvumela wonke umuntu ukuthi enze noma yini, kepha kumayelana nokuqinisekisa UKUPHILA: UKUPHILA NOKUPHILA.
Kuyadabukisa, kuyadabukisa kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka. Uma kungukungabekezelelani, sengivele ngabona ukuthi i-LGBT yiyona ebi kakhulu.
Ngikuthola kuyisinengiso ukuvula le blog futhi ngithole lokhu okuthunyelwe kobungqingili, kimi nakwabaningi kakhulu.
Iningi labafundi bale bhulogi alikaze lishiye umbono, yizenzo ezimbalwa ezizolile ezizame ukubhekana nabangabekezeleli futhi kulowo nalowo kubo kunezinkulungwane esinamahloni ngazo ngokuthi u-Desdelinux uthathiwe futhi waphathwa ngama-troll angama-homophobic.
Sifunde lokhu "kuthukwa ngamazwi" okuthukayo ngethemba lokuthola inhlansi yenhlonipho namaqiniso amasha angaxolela lo Mphathi Omkhulu odumile ngokuthola uhudo lwengqondo olulungele abantu abane abazonda abathandana nabobulili obufanayo abafunda le bhulogi ukwengeza indle yabo yengqondo ethuka amaqembu amancane Kulokhu, i-LGBT, kepha bekungaba yinoma ngubani omunye umuntu: abantu bomdabu, abantu abanemibala, ama-gypsies, abagula ngengqondo ... noma ngubani.
Egameni lami kanye nezinkulungwane zabafundi abadumazekile.
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho, kuyisampula yangempela "yesenzo esizolile". Ngale ndlela, ungasidlulisa isixhumanisi esiya kwinhlolovo lapho kuvela khona "izinkulungwane zabafundi abadumele", noma ungomunye walabo abajwayele ukukhulumela "wonke umuntu" ngaphandle kokubonisana nabanye?
Phansi impela ukuwela kungxabano ye-populum. Lowo owayengumphathi omkhulu wakhethwa ngontanga yakhe kuleso sikhundla, lokhu akusho ukuthi isisekelo noma abasebenzisi baso bayayisekela imibono yenkolo, ezepolitiki noma yezenhlalo yale ndoda. Uma kuphikiswa ngokuthi esikhundleni sakhe angaba nokuchema nomphakathi wezitabane, futhi abaphathe kabi labo basebenzi, kungani bemvotele? Kunoma ikuphi, i-CEO ayihlali ilingana nomnikazi noma umninimasheya - imvamisa bangabaphathi bezinkampani noma onjiniyela abanolwazi lokuphatha izinhlangano - kanye newayini, angahamba ngaphandle kokuthinta izikhundla eziphakeme noma amanani wenhlangano, okuyizinto kuchazwe ngabanikazi.
Sizosebenzisa isifaniso, ngoba kubonakala kuyisibalo esaziswa kakhulu abahlaziyi abaningi: Bangacabangani uma ukufinyelela iwebhusayithi kuvinjelwe ngokwesiphequluli abasisebenzisayo? Ingabe lokho kungafaneleka njengokubandlululwa? izizathu "ezinhle" eziqinisekisa lesi senzo nezinye "ezimbi" ezingasenza sisole? Ngubani ongaba yijaji eliphakeme ukunquma ukuthi yiziphi izizathu ezingaba zinhle noma ezimbi?
Kulabo abacabanga ukuthi ukufaniswa engikulethayo akunangqondo, ngicacisa ukuthi lokhu bekuyikho ngempela ukuduba okusetshenziswe yi-OkCupid kusiphequluli seMozilla. Wake wama wacabanga ukuthi ngeshwa kanjani lesi sibonelo se-inthanethi yamahhala nevulekile?
Ngiyabonga nonke ngemibono yenu, kubandakanya nalabo engingavumelani nabo kakhulu.
Ukufinyelela kuvinjelwe lapha kuye ngenethiwekhi oyisebenzisayo, uma usebenzisa i-TOR ngeke ungene.
IWebhu evulekile nevulekile ngeke ibe yindawo lapho umnikazi, okhokha esikhwameni sakhe sokubamba ikhasi, engakwazi ukubeka umkhawulo ekufinyeleleni kokuqukethwe kwalo. Ulahlekile kakhulu.
Yimina owabeka umkhawulo ku-TOR, futhi ngikukhumbuza uma kwenzeka ukhohlwa ukuthi kumayelana nani, ukuthi ukufinyelela KUPHELA kunqatshelwe ku-COMMENT, noma ngubani osebenzisa i-TOR, i-VPN, i-Vidalia, i-JAP noma enye indlela efanayo angafunda KONKE kusayithi .
Uma unomusa kangaka, uthatha isithombe-skrini somuntu ongakwazi ukungena nokufunda i-FromLinux esebenzisa i-TOR? 🙂
Bekufanele ngabe ngithi "awungeni ukuze uphawule"
Ngokunjalo, bekuyiqiniso elifuna ukwazi, hhayi ukugxeka, kokunye ukuphawula okufanayo kucacisa ukuthi wonke umuntu kufanele akhululeke ukunqanda ukufinyelela kumasayithi abo ayimfihlo kanye nemininingwane, ngoba ngalokho bakhokhela ukusingathwa.
Isicelo esingenangqondo Ngingasithatha kanjani isithombe-skrini somunye umuntu? XD
Kufanele kube yilokho: Ngizama ukungena ngisuka ku-TOR bese ngithatha isithombe-skrini.
Mnu. Brown Yini esixoxa ngayo kulokhu okuthunyelwe? IMozilla izwile ingcindezi yeningi futhi yenze ngokufanele. Emibhalweni ngifunde abaningi bekhungathekile (bohlobo: Anginalutho olumelene nezitabane kodwa ...) abakhononda njengezinja ezikhonkotha zivalelwe ezindlini zezinkukhu lapho zibona enye ihamba ngokukhululeka. Ngiyanikhuthaza ukuthi nidube iMozilla ukuze nibakhombise ukuthi niyiningi leqiniso Yini eningcono kunama-pink mafia futhi anizenzi lezo zinto? Shiya isihloko esingahambi futhi esingafiki kuwe (angikudeli). Lokhu kubonakala njengesaba sokushukumisa "indawo yokwamukela izivakashi" yezitabane.
Kumele ngikhumbule ukuthi kuyisinqumo sesisekelo, akekho owabaphoqa. Ukuze ube "yi-CEO" kumele ubonakale ubekezela (okubandakanya izinkolo, izinkambiso namasiko ongawathandi). Ngenkathi sisusa isikhundla sokuba ngumongameli ohloniphekile ku-WWF eNkosini yaseSpain, wonke umuntu wakubona kunengqondo. Akufani ukuthanda izilwane njengokuzithanda zifile ku-safari noma enkomeni. Awukwazi ukuthi uyawahlonipha amalungelo ezitabane bese ngasikhathi sinye ubeke imali ukuze uzithathe.
Ukube bengingu-Eich bengizowavuma amaqiniso. Ngingayeka ukwenza izaba ezingenangqondo, ngisho engikucabangayo ngemishado yezitabane, bese ngibeka isikhundla sami kuMozilla Foundation. Ukuzama ukukufihla kubonakala kuwubuwula kimi.
PS: Ngiyabona ukuthi uwuzibe umbuzo wami mayelana nemithelela yenkolo yegama elithi umshado. Wenze kahle kakhulu, kuphelile ngawe.
uzwe ingcindezi yeningi
Ngabe bonke abasebenzisi be-firefox bayizitabane? hahaaha ungadideki ukuthi abantu benza umsindo omkhulu, ukuthi le yi-xD eningi.
Bakudina kangakanani lokhu kudinwa, bazolayisha nini izinto kubhulogi ezikufanele ngempela? Sekuyibhulogi lebhizinisi elibonisa impikiswano nelingenangqondo esikhundleni salokho okwakuhlala kuyibhulogi lemininingwane ebalulekile ye-gnu / linux, amabhukwana, iziqondiso, amaphrojekthi njll i-blog enhle kakhulu ngiyibona manje futhi i-blog angazi ukuthi kwenzekani kuye ngicela u-agan ingxenye yokuthukuthela nokukhala ukuze lo saziwayo ongenangqondo angaxubeki nalokho okubaluleke ngempela.Akekho onendaba nokuvutha komphakathi wezitabane ongasizi ngalutho.Kwenze kuphela umsebenzi omuhle washiya isisekelo esihle abasizuzile? akukho lutho lokuthi omunye uchwepheshe afike abe ngumphakathi wezitabane oziqhenyayo niyizingane nje ezinesidina esihlekisayo
Ekhasini lokuqala, ucezu lombono ongu-1 kuphela, okokufundisa okungu-8.
Ibhulogi yinhle kakhulu kepha isiphenduke isililo nezitabane ezinokuthukuthela
kanye nabahloli bezincwadi abangaphezulu kwalokhu njengoba behlola konke okuthunyelwe engikushiyayo kepha akunandaba ukuthi izitabane ziyakhala futhi ziba nemikhuba bese zilandela umbukiso lapha ku "desdelinux" ukuthi igama alisabhekiseli kulokho osekuyibhulogi yosaziwayo neziyaluyalu
ukucubungula umlayezo wami wokuthi okuningi kunikeza okungenani umphathi kuzokwazi ukuthi ngicabanga ini ngoba banikeza isikhala ebhizinisini lokubonisa futhi bazocubungula umbono onengqondo wokuthi le bhulogi iguqule kanjani
i-gnu / linux eningi nokuningi okuthunyelwe ama-faranduleros nama-crybabies
Umbono awulona iqiniso neze. Isibonelo, ekhasini le-1 kuphela kunengqikithi yama-athikili ayi-9, kuwo i-1 kuphela umbono kanti okunye, okusho ukuthi, ama-athikili ayi-8 ngaphezulu anobuchwepheshe.
Ngaphambi kokunikeza umbono wakho, sicela uzame ukuwenza ube yiqiniso futhi ube nenhloso.
Le ndatshana ingenze ngahlekisa kakhulu ..., lo mbuzo ulula kakhulu, akukhona ukuthi bazama kanjani ukukhohlisa ukungena kule ndatshana "elungile ngokwezepolitiki", kuyinto eyisisekelo, njengokucela iTOLERANCE yabantu ababonisa ukungabekezeleli hhayi imibono nje , kodwa ngezenzo.
Awusoze wacela ukubekezelelana kumuntu ongekho, kulula lokho.
Noma ngubani ozama ukukhawulela inkululeko yabantu (qaphela, angikhulumi ngokucabanga, ngoba ungaba nama-phobias nama-manias akho, kepha NGOKUQINISEKILE, ubakhuthaze) abayifanele inkululeko yabo.
Umuntu ozama ukukhawulela inkululeko kumuntu ongenzi lutho olungalungile kunoma ngubani uzohlala ekhululekile ukwenza njalo, kanti umuntu ozama ukuyivimba ngokunengqondo kufanele avinjelwe.
Lo ngumqondo olula (futhi kufanele sikuqonde lokho lapha isikhashana), futhi akunandaba ukuthi ngabe uyi-CEO ye-Mozilla sengathi ungumshaneli wasemgwaqeni oshanela abantu abangenamakhaya, ukungabekezeleli nhlobo ukungabekezelelani, isikhathi, akusekho.
Uxolo, ngibeke isigaba okungalungile:
Kufanele sivimbele ngazo zonke izindlela ukuthi othile azame ukukhawulela inkululeko eqenjini elithile elingenzi lutho olubi kumuntu.
Vumelana ngokuqinile nalokho okushiwo ku-athikili.
I-100% iyavumelana nawe, ngiyabonga
Asibone. Angisho ukuthi le ndoda ilizonda iqembu le-LGTB, kodwa futhi ngikholwa ukuthi nimkhipha ngokweqile. Ukususa icala, usola ukuthi unabantu obaziyo "abanobungqingili" abangawuvumeli umshado wobungqingili ngoba awuhambisani nenkolo (?) Bayasho. Futhi kufanele kucaciswe ukuthi into eyodwa akuwona owokuvumela umshado wabantu abathandana nabobulili obufanayo, ngenxa yezizathu zokuziphatha noma ezenkolo, futhi okunye ukukuvimbela, osekuvele kuhlanganisa ukuthatha lelo lungelo kuwo wonke umuntu. Ngoba banelungelo, labo abafisa kanjalo bazoshada, kepha uma ingekho, ngisho nalabo abanakho lokho "kukholwa okuphikisanayo." Futhi okwenziwe yile ndoda ukubeka imali ngokuxhasa umkhankaso obekuhloswe ngawo ukuqeda lelo lungelo, futhi lelo lungelo lingavele "licasule" uhlobo oluthile lomcabango: ubungqingili.
Izizathu kungenzeka ukuthi azihlangene nakwezobuchwepheshe nomhlaba wesoftware, kepha akungabazeki ukuthi isithombe seMozilla Foundation sonakaliswe kakhulu yilolu daba, ngakho-ke ngibona ukushiya isikhundla se-CEO njengokulungile, yize bengizokwenza ngiyishiye lapho. Futhi akubonakali kunempilo kimi ukwenza izinkuni zomuthi esiwile, ukushiya ngokuphelele isisekelo sekuvele kubonakala ngokweqile, ngaphandle kokuthi yebo, kunezinye izizathu, kepha hheyi, ngiyaqonda futhi ukuthi kunzima ukusebenza njengakuqala indawo lapho okuhle abanye abantu becele ikhanda lakho.
Noma imuphi umuntu ophikisana nelungelo le-LGBT ngokwencazelo ubungqingili. Futhi akukho okunye ongakusho. Ngokusobala, iqembu elithintekile lizokuphika, kepha kulula kakhulu ukukuqonda: umuntu akanakuphika ukuthi uyabandlulula kepha ngasikhathi sinye ubheka ukuthi amalungelo athile "ayimvelo" ukuthi agcinelwe abamhlophe kuphela, nokuthi abamhlophe baguquke kangcono emisebenzini ethile abamnyama, njll. Okufanayo kuya ngamalungelo ezitabane. Uma ubekezelela ngokuphelele, ubamukela ngempela ongqingili, kufanele kubonakale kukuhle, kujwayelekile, kunengqondo, ukuthi uphathwa ngokufana ncamashi nabanye abantu.
Emshadweni, ngokusho kwakho onemvelaphi engokwenkolo, umane ukhulume kusuka KOKUNGAZI okujulile. Kakade empucukweni yasendulo, kudala ngaphambi kokuba uKristu azalwe (uma wayekhona ngempela) isikhungo somshado sasikhona. Empeleni, uma unolwazi oluthile lwe-anthropology, uyazi ukuthi lesi sikhungo sikhona kuyo yonke impucuko; Kube yisikhungo esiyisisekelo, ngoba silawula ubudlelwano phakathi kwabantu bomphakathi. Futhi namhlanje, emiphakathini yanamuhla, yonke imishado i-CIVIL, futhi umshado wenkolo awunanzuzo esemthethweni.
Ngakho-ke, okuwukuphela kwesizathu sokungawubizi ngokuthi umshado nokusebenzisa izichasiso ezifana nenyunyana yomphakathi, yingoba izinkolo, ikakhulukazi ezobuKrestu noma ezobuSulumane, ziyaqhubeka nokufaka ingcindezi yabo, ukukhohlisa kwabo, ubushiqela babo, ukungabekezelelani kwabo, ukuphoqelela imibono yabo, indlela yabo ukuhlala emphakathini, ngaphandle kokuhlonipha enye indlela yokuphila ehlukile.
Ngeshwa yile ndlela umhlaba ohamba ngayo: ukuntuleka kwezimiso zokuziphatha: ngamunye ubheka izintshisekelo zakhe futhi akaniki lutho ngabanye. Vele, kufanele ulunge ngokwezepolitiki: kusho umphakathi onamagugu, lapho kungagcini kuphela ngezinto ezibonakalayo, ezomnotho, izindaba zenzuzo, kepha futhi nokuziphatha, izindinganiso.
Yini isihogo okufanele siyigubhe manje?
Uma ningabantu obakhathalelayo, noma onozwela ngabanye, lezi zindaba kufanele zikujabulise. Ngemuva kwalokho bakhombisa kuphela ukuthi unobugovu, nokuthi unendaba nezinto ozithandayo.
Ukungabekezelelani okuncane kwanoma yiluphi uhlobo lodlame lomzimba, lwengqondo noma lwezenhlalo (okunengqondo ukubandakanya ubandlululo). Kusukela manje, abantu abathandana nobungqingili kumele bangene ekhabetheni. Futhi yi-LGBT engagcina iqale ukuphuma ekhabetheni.
Kuyisibonelo esihle ukuthi ngisho nomdidiyeli wodumo, owaba ngumsunguli nomqondisi weFirefox, uhlupheka ngemiphumela yokuzonda kwakhe abathandana nabobulili obufanayo, ngoba kusho ukuthi lapha akekho obalekayo, noma umuntu ohlakaniphe kunabo bonke noma abacebe kunabo bonke. Lapha wonke umuntu kufanele athobele umthetho, ngakwesokudla, ukuhlonipha.
Umphumela womdlalo wokugcina: UBULUNGISA BOMPHAKATHI 1 - FASCISM / INTOLERANCE / RACISM / HOMOPHOBIA… 0
Awukwazi ukuba ngumuntu ozenzisayo noma ongenangqondo.
Bobabili umbhali wale ndatshana, njengaleyo yinye i-athikili efanayo, uDiazepan, bazimemezela njengabavikeli abakhulu be-FREEDOM OF EXPRESSION, futhi ngenxa yalesi sizathu bagxeka ukuduba kwe-LGBT kwalowo owayengumphathi omkhulu we-Firefoz.
Kepha kufanele ngikutshele ukuthi ngiyakungabaza, ngoba ukunyakaza kukhonjiswa ngokuhamba, abantu bachazwa ngezenzo zabo, kanti wena, UNGANGIBEKILE, futhi impela nabanye abaningi, hhayi ngokuthuka noma ukungafaneleki, ngoba nje bekukhathaze kakhulu umbono wami ngawe nabanye abasebenzisi.
Ukhombisa ukungabekezelelani nokweqisa emibonweni ebucayi futhi ephikisana neyakho, uyayigxeka, uyisuse, ngaphandle kokuhlonishwa, ungahloniphi ubuningi ... ngakho-ke kungani ugxeka i-LGBT ngokweqisa okukhulu ngezenzo zabo, ngokuduba kwabo? Balwa nomlingisi onyathele amalungelo abo nenkululeko yabo, ekhokha ukuvimbela amalungelo kwamanye amaqembu.
Noma kunjalo, njengabantu, kusamele ufunde okuningi.
Isikhulu esiphezulu sakwa-Apple siyi-HOMOSEXUAL, TIM COOK, okuyisici esibaluleke kakhulu ngaphakathi kwe-Apple, okuyinkampani yezobuchwepheshe enamandla amakhulu kwezomnotho emhlabeni. Lesi yisibonelo esihle sokuthi asidingi abantu abazonda abathandana nabobulili obufanayo, inkolo eyedlulele, amaNazi, ubandlululo, ukucwaswa kwabokufika, ubulili, noma omunye umuntu onemikhuba yokuziphatha engabazekayo, ekuqhubekeni kwesintu.
Kuyadabukisa ukuthi kule ngosi, sekunama-athikili amabili, futhi angaqhubeka, aqhubeke nokuthuka nokuhlazisa umphakathi we-LGBT NGOKUVUMELEKILE ukuvikela amalungelo abo angenakulinganiswa (ukulingana, ukungabandlululi) ngokuthatha izinyathelo ezinokuthula nezomthetho ezinjengokuduba.
Bonke labo abavikele ngokungenasizathu umhlukumezi, owayeyisikhulu esiphezulu seFirefox, futhi abahlasele izisulu zalolu dlame, i-LGBT, abahlukunyezwe ngokuya ngocansi, baya phambili.
Ukube bekungezona izindlela zokucindezela, ukuduba, izikhalazo emithonjeni yezindaba zomphakathi ngokuziphatha okuyihlazo nokungaziphathi kahle kwabanye abantu, okudale le nkinga, ikakhulukazi enokhahlo futhi engenabulungisa eSpain, amaqembu amaningi nezinhlangano ezinjenge-15M, PAH Labo abathintekile yi labo abathandwayo, igagasi elimhlophe lempilo yomphakathi, igagasi eliluhlaza lemfundo yomphakathi, belingazifezi izinhloso zabo.
Yakhiwa kanjena IZWE ELINGCONO: ukusola nokungathuli ngokungaziphathi kahle, ngokuziphatha okubi, nangokuziphatha okuyihlazo. Into ebi kakhulu ongayenza ukuhlala uthule njengezifebe ngoba kufanele ulondoloze izintshisekelo ezithile zezinto ezibonakalayo, noma amalungelo abantu enyathelwa phansi.
Okubi kakhulu ukuwela ekugxekeni, ekuzenziseni: ingabe ukuhlukunyezwa (ukuthukwa, ukubandlululwa, ukungavunyelwa, ukudelelwa, njll.) Eqenjini lomphakathi inkululeko yokukhuluma? Cha. Inkululeko yalowo nalowo iphela lapho kuqala enye: uma izenzo zakho zisho uhlobo lokuhlukumeza abanye ngakho-ke kuyindlela yokukhuluma engamukeleki futhi engaziwa emphakathini wanamuhla, wobuningi nobekezelelanayo.
Kubo bonke labo abagxeka kanzima ama-LGBTs, ngincoma ukuthi ngaphambi kokukhuluma, babheke umngane we-LGBT, empeleni, bangabi nabangane abangacabanga ukuthi babukeke kahle, futhi bazobona ukuthi konke ukucwaswa kwabo kuzosulwa kanjani, futhi BAYOKUQONDA LOKHO NGOKUBEKEZELA KWABASEBENZI I-ZERO, ngoba kuningi okufanele kuqedwe ubungqingili emphakathini, ngakho-ke, kuyaqhubeka ukukhiqiza ukuhlupheka okuningi kubantu be-LGBT, ngakho-ke, lesi sihlava sobuntu kufanele siqedwe, kanye nabanye abaningi (machismo, xenophobia, poverty, etc. )
I-athikili enhle. Isoftware yamahhala ayigcini nje 'ngokulunga kwezepolitiki' kepha inezitha ezinamandla. Ukwehlulwa kwenkululeko yomuntu ngamunye, imiphakathi, izizwe nobuntu uqobo ukuthi ukungabekezelelani 'okulungile ngokwepolitiki' kufeza izintshisekelo zezitha zenkululeko namalungelo abo bonke. Ngabe izishoshovu zamalungelo ezitabane zonke zisebenzisa isoftware yamahhala? Ngabe kufanele siqale imikhankaso yokufuna ukuxoshwa kwabo ezinhlanganweni ezahlukahlukene abakuzo ngokungasebenzisi isoftware yamahhala? Ngubani ozuza kulokhu? Ukube uBill Gates noma uSteve Jobs bebenikele emkhankasweni womshado wezitabane, ngabe iMicrosoft neApple bazoqhubeka nokuqinisekisa amaphupho 'okulungiswa ngokwezepolitiki' ngenkululeko yesoftware?
Dlala i-Tetris esigungwini